YEYINTNGE(CANADA): Monday, November 17
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဆိုတဲ့လမ်းက ပိတ်နေပြီ”
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/17/20080အကြံပြုခြင်း
Monday, 17 November 2008 18:01 ဧရာဝတီ
Monday, 17 November 2008 17:49 တွမ် ကရေမာ
ရွှေတြိဂံ ဒေသအတွင်း ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလာသည် ဆိုသော်လည်း ဒေသအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ပပျောက်ရေး အားထုတ် ကြိုးပမ်းမှု များတွင် ဖုန်းကွယ်ထားသည့် ကြီးမားသော ချို့ယွင်းချက်များရှိနေသေးသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးတဦး ဘိန်းခြစ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ- KADAC)
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၊ လောနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတို့တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ရွှေတြိဂံဟု ထင်ရှားလူသိများသော ထိုနိုင်ငံ ၃ ခု ဆုံတွေ့ရာဒေသသည် တချိန်တခါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘိန်းဖြူအများ ဆုံး ထုတ်လုပ်သော နေရာဒေသတခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤရွှေတြိဂံဒေသ၏ အဆင့်ကို ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ် လုပ်မှု အဆမတန် များပြားတိုးတက်လာခြင်းဖြင့် အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံက ဆက်ခံလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်းနိုင်ငံက ယနေ့ ကမ္ဘာ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ထုတ်လုပ်ပေးနေသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) ၏ မှတ်တမ်းများအရ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ရွှေ တြိဂံဒေသမှ ဘိန်းဖြူမက်ထရစ်တန် ၁,၃၀၀ ထုတ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ၏ သုံးပုံ တပုံရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်မူ တန်ချိန် ၄၆၀၊ တနည်း ကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိတော့သည်ဟု ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေး အရာရှိများက ထိုကဲ့သို့ ကျဆင်းလာမှုကို ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုကြီးတခု အဖြစ် ချီးကျူးထောမနာ ပြုခဲ့ကြသည်။ "ရွှေတြိဂံဒေသသည် ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျလာနေသော အံ့သြဖွယ်ရာ ကာလတခုသို့ ချင်းနင်းဝင်ရောက်လာနေပြီ ဖြစ်သည်" ဟု UNODC ၏ ဒါရိုက်တာ အန်တိုနီယို မာရီယာ ကို့စ်တာ (Antonio Maria Costa) က ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဆယ်စုနှစ်တခုကြာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော မူးယစ်ဆေးဝါး ထိန်း ချုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ရှင်းလင်းစွာ ရလဒ်ပေါ်ခဲ့ပြီ" ဟုလည်း သူက ပြောခဲ့သည်။
သို့သော် ထိုကဲ့သို့သော အကောင်းမြင်မှုအပေါ်တွင် စောဒကတက်စရာ အချက်အနည်းငယ်တော့ ရှိနေသည်။ ပထမ အချက်မှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု မည်မျှမြင့် မားနေကြောင်း ပမာဏခန့်မှန်းမှု အတိအကျနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာ ရှိနေသေးသဖြင့် ကျဆင်းမှု ပမာဏ အတိအကျနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေအတင် မေးခွန်းများ ရှိနိုင်သေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၁,၂၀၀ ခန့်ရှိခဲ့သည်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၂, ၄၀၀ အထိ နှစ်ဆ ခုန်တက်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်းများက ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ထို ကာလအတွက် ထုတ်ပြန်သော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ကိန်းဂဏန်းများက ပို၍နည်းပါးနေပါသည်။ ထိုမျှမက မြန်မာနိုင်ငံ ၏ နှစ်စဉ် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တိုင်အောင် တန်ချိန် ၂,၀၀၀ အထက်တွင် ရှိသည်ဟုလည်း ကုလသမဂ္ဂ က ခန့်မှန်းထားပါသေးသည်။
သို့သော် တချို့သော လေ့လာသူများကမူ ယင်းကိန်းဂဏန်းများသည် နိုင်ငံရေးအပေါ်တွင် အခြေခံထားသော ကိန်း ဂဏန်းများ ဖြစ်ကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လိုအပ်သလို စာရွက်ပေါ်တွင် ထားရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းများသာ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ " အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်မည်ဆိုပါက ကြီးကျယ် ခမ်းနားထည်ဝါလှသော ကွန်ဖရင့်ကြီးများနှင့် အထင်ကြီးလောက်ဖွယ် အစီရင်ခံစာများတွင် အခြေအမြစ်မရှိ ဖေါ်ပြထား သော ယင်းကိန်းဂဏန်းများသည် ပုံကြီး ချဲ့လွန်းလှသည်" ဟု ကွယ်လွန်သူ ရှမ်းအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် တဦးလည်းဖြစ်၊ ပညာရှင်တဦးလည်း ဖြစ်သူ ချောင်ဇန်း ညောင်ဝေက ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရေးသားခဲ့ဖူးပါသည်။ တချို့သော ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအရ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုသည် နှစ်စဉ် တန်ချိန် ၁,၀၀၀ ထက် မည်သည့်အခါမှ မပိုဟု ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုပုံစံများသည် နေရာအသစ်များတွင် ပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အပြင် လွန်ခဲ့သော၂ နှစ်အတွင်း ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ထပ်မံတိုးတက်ခဲ့သည်ကိုလည်း မြင်ရပြန်သည်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု အဓိကတိုးများလာသောနေရာများမှာ အထူးသဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။
အမ်စတာဒမ် အခြေစိုက် Think Tank အဖွဲ့တခုဖြစ်သော Transnational Institute (TNI) က ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော သုတေသနပြုချက်တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုသည် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းဒေသများအတွင်းရှိ မြို့နယ်များအထိပါ ပြန့်ပွားခဲ့သည်ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် ထိုင်းနယ်စပ်နှင့် နီးစပ်သော ဒေသများနှင့် နမ့်ဆမ်၊ ကွမ်ဟိန်းနှင့် မိုးနဲ မြို့နယ်များတွင်လည်း သီးထပ်စိုက်ပျိုးမှုများ ရှိလာခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို တင်းကျပ်စွာ ကန့်သတ်တားမြစ်ထားသော ၀ နယ်မြေ၊ ကိုးကန့် နှင့် မုန်းလားဒေသများ သည် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ကင်းလွတ်နယ်မြေများအဖြစ် တည်ရှိနေသေးသည်ကို TNI သုတေသနပြုချက်က အတည်ပြု ထားသည်။ "ကျနော်တို့ဒေသအတွင်းမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ရှိမရှိကို မြို့နယ်တခုချင်းအလိုက် နှစ်စဉ် ကျနော်တို့စစ်ဆေးပါ တယ်။ အကယ်၍ ဘိန်း တမူ (၀. ၀၆၇ ဟက်တာ) စိုက်ပျိုးတာကို ကျနော်တို့ တွေ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီသူတွေကို ထောင် ဒဏ် ၃ နှစ်နဲ့ ယွမ်ထောင်ဂဏန်း (၁ ယွမ် = ၀. ၁၅ အမေရိကန်ဒေါ်လာ) စသဖြင့် ဒဏ်ရိုက်ပါတယ်" ဟု ၀ အမျိုးသား သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) ၏ ကိုယ်စားလှယ်တဦးက TNI သို့ မကြာသေးခင်က ပြောပြခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ၀ တပ်များ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသနှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေသော အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည့် ဒေသများဖြစ်သည့် ဟိုပန်းမြို့နယ်တွင်မူ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုးများလာနေသည်။ UWSP ၀ တပ်များက ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တားမြစ်ဟန့်တားလိုက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း ထိုဒေသမှ ဘိန်းစိုက်သူများက ဟိုပန်းဒေသအတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ဝင် ရောက်လာကြပုံရသည်။
တချိန်တခါက အရှေ့တောင်အာရှ၏ အဓိက ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှုဒေသများဖြစ်ခဲ့သော လောနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် ၀ ဒေသ နှစ်ခုစလုံးတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကျဆင်းလာရခြင်းသည် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် လောနိုင်ငံ အစိုးရက ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု လုံးဝမရှိသော နိုင်ငံတခု အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ သံန္နိဌာန်ပြုချက်ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖေါ် ၀ါရီလတွင် ဘိန်းကင်းစင်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လူသူအရောက်နည်းသော တောင် ထူထပ်သည့် ဒေသများတွင် ခိုးဝှက်စိုက်ပျိုးနေသော အသေးစား ဘိန်းစိုက်ခင်းများ ဆက်လက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလာရခြင်းမှာလည်း ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွင်း တည်ရှိသော အပစ်ရပ်အဖွဲ့များက ၎င်းတို့ဒေသအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တားမြစ်ဟန့်တားမှုများ ထုတ်ပြန်ကြေညာလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ တားမြစ်ဟန့်တားမှုများပြုခဲ့သည့် အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA) ဒေသ မုန်းလားတွင် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၌လည်းကောင်း၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA) ၏ ကိုးကန့်ဒေသတွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၌လည်းကောင်း၊ (UWSP) ၏ ၀ ဒေသအတွင်းတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်၌ လည်းကောင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တားမြစ်ပိတ်ပင်အမိန့်များ ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ယခင်ကာလများတွင် ထိုဒေသများသည် ဘိန်းစိုက်ပျိုးသော အဓိကဒေသများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ တိုက် ခိုက်လာခဲ့ရသော ပြည်တွင်းစစ်ပွဲဒဏ်နှင့် ပိတ်ဆို့မှုဒဏ်များ ခံခဲ့ရပြီးနောက် ၎င်းအပစ်ရပ်အဖွဲ့များသည် မူယစ်ဆေးဝါး စီးပွားရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အမည်းစက်ကို ဖယ်ရှား၍ နိုင်ငံတကာ၏ နိုင်ငံရေးအရ အသိအမှတ်ပြုခံရရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆင်းရဲချွတ်ချုံကျနေသော ဒေသများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီအထောက်အပံ့များ ရရှိရန် မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ ရွှေတြိဂံဒေသအတွင်း အများအားဖြင့် မြန်မာဘက်ခြမ်းအတွင်း ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်း လာရမှုသည် ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၏ မူဝါဒဆိုင်ရာ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှု တခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပေ။ ရွှေတြိဂံ ဒေသမှ ထုတ်ကုန်များမှ အာဖဂန်နစ္စတန် ထုတ်ကုန်များသို့ ကမ္ဘာ့ဘိန်းဈေးကွက် သိသိသာသာ ပြောင်းရွှေ့သွားသော ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာလည်း အသစ်အဆန်းဖြစ်စဉ် တခုတော့ မဟုတ်ပေ။ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ပါက နိုင်ငံတကာ ဘိန်းနှင့် ဘိန်းဖြူဈေးကွက်တွင် ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် တူရကီ ဘိန်းစိုက်ကွက်မှ အီရန်နှင့် ပါကစ္စတန်သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး ထိုမှ တဖန် အာဖဂန်နစ္စတန်သို့လည်းကောင်း ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ မက္ကစီကိုနှင့် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံများတွင် ဘိန်းစိုက် ကွက် အသစ်များ ဖြစ်ပေါ်နေပြန်သည်။
မြန်မာ့ဘိန်းဖြူသည် ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက ဈေးကွက်များတွင် အာဖဂန်မှ ထုတ်သော ဘိန်းဖြူ (ဥရောပနှင့် အမေရိကန်ဈေးကွက်) နှင့် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများမှ ထုတ်သော ဘိန်းဖြူများ (အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့) ၏ လုံးဝ သိမ်းပိုက်မောင်းထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရသည် ဟူသောအချက်သည် လူသိနည်းသလို၊ အစီရင်ခံစာများ ရေးသားရာ တွင်လည်း ခြွင်းချန်ထားခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ အရေးကြီးသည့် အချက်တချက်လည်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ တွင် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှ ဘိန်းဖြူများသည် အမေရိကန်ဈေးကွက်တွင် တဦးတည်း မင်းမူနေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လာသော ဘိန်းဖြူအားလုံးနီးပါးသည် လတ်တလောအားဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတေးလျနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင်သာ ဈေးကွက်ရှိ သုံးစွဲနေကြတော့သည်။
ယခင်က ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်သော တချို့အုပ်စုများသည် စိတ်ကြွဆေးပြားများ (Amphetamine-type stimulants –ATS) ထုတ်လုပ်ရေးဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြောင်း ညွှန်ပြချက်များ ရှိနေသည်။ အပစ်ရပ်အုပ်စုများက ဘိန်းစိုက် ပျိုးမှုနှင့် ဘိန်းဖြူထုတ်လုပ်မှု တားမြစ်လိုက်သော ဒေသများဖြစ်သည့် ကိုးကန့်နှင့် ၀ ဒေသများကဲ့သို့သော ဒေသများ တွင် တရုတ်ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်း အများအပြားက ATS စိတ်ကြွဆေးပြားများကို လာရောက်ထုတ်လုပ်နေသည်ဟုလည်း သတင်း အရင်းအမြစ်များစွာက အခိုင်အမာ ပြောဆိုနေကြသည်။
ပို၍စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသော အချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လောနိုင်ငံရှိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးခဲ့သူများအကြား ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ကျ ဆင်းလာမှုကြောင့် ဘေးဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကျဆင်ခြင်းကို "အောင်မြင်မှု တခု" အဖြစ် ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရန်ပင် ခက်ခဲလှသည်။ ဘိန်းစိုက် တောင်သူဦးကြီးဟောင်းများကို နိုင်ငံတကာ အကူ အညီ တချို့ပေးထားပြီး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများစွာကလည်း "၀" နှင့် ကိုးကန့် နယ်များအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းထောက်ပံ့မှုများမှာ ၎င်း ဒေသခံတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုအပေါ် ပိတ်ပင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည့် ဆိုးကျိုးဒုက္ခ အပေါ် မထေမိသည်ကို အရှင်းသား မြင်တွေ့နေရသည်။
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဘက်ခြမ်းဒေသအတွင်း ဘိန်းစိုက် တောင်သူဟောင်းများအတွက် အရေးပေါ် အစားအစာ အထောက်အပံ့များ ပေးထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ယင်းအကူ အညီသည် ရေရှည်တည်တံ့မည့် အဖြေတခု မဟုတ်ပေ။
ရွှေတြိဂံဒေသအတွင်း ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော အကြီးမားဆုံး ဆိုးကျိုးဒုက္ခမှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးတောင်သူများအပေါ်တွင် သက်ရောက်နေသည်ကို အငြင်းပွားဖွယ် မရှိသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ လောနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ တောင်ကုန်းများ၊ တောင်ထူထပ်သော ဒေသများအတွင်း ဘိန်းခင်းများ စိုက်ပျိုးလာသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ မက ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဘိန်းခင်းများကို လူသူအရောက်နည်းသော မတ်စောက်သည့် တောင်စောင်းများ သို့မဟုတ် လျှိုမြောင်ငယ်များတွင် များသောအားဖြင့် စိုက်ပျိုးကြပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း သို့မဟုတ် မြေသြဇာအသုံးပြုခြင်းများလည်း မရှိကြပေ။ အထွက်နှုန်းသည်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ကျသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသော အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် ခက်ခဲသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များကြောင့် လူသူမနီး တောင် ထူထပ်သောဒေသများတွင် ဘိန်းခင်းအများစုကို စိုက်ပျိုးကြသောကြောင့်သာ ဈေးကွက်တွင် ရှားပါး၊ ယှဉ်ပြိုင်ရန် ခက်ခဲသော သီးနှံ ဖြစ်နေကြရသည်။ ခက်ခဲသော မြေအနေအထားတွင် ဘိန်းပင်များကို လွယ်လင့်တကူ စိုက်ပျိုး နိုင်ပြီးပြန်ရနိုင်သည့် တန်ဖိုးကလည်း သူတို့အတွက် ကြီးလှသည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်လည်း လုံးဝ ဆက်နွယ်မှု ရှိနေသည်။ ဘိန်းစိုက်ပျိုးသူအများစုမှာ တောင်ပေါ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသော လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများမှ ဆင်းရဲသော ကျေး ရွာသားများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုတိုင်းရင်းသားများအထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၀ ၊ အခါ၊ လားဟူ၊ ပလောင်၊ ပအို့ဝ်၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ကရင်နီနှင့် ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ ပါဝင်ကြပြီး လောနိုင်ငံမှ ယောင် (Yao)၊ မုန်နှင့် အခါ တိုင်းရင်းသားများ အပြင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မုံး၊ လားဟူ နှင့် အခါတိုင်းရင်းသားများ ပါဝင်ကြသည်။
မိရိုးဖလာအရ တိုင်းရင်းသားများသည် ဘိန်းကို ငှက်ဖျားရောဂါ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ၊ ၀မ်းပျက်ဝမ်း လျှောရောဂါနှင့် အနာသက်သာစေရေးအတွက် ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ဘိန်းကို ဓလေ့ထုံးစံ ပွဲတော်များ၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲများနှင့် အသုဘ အခမ်းအနားများတွင်လည်း အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင် ဘိန်းအစေ့ကို ဟင်းချက် ဆီကြိတ်ရာတွင် အသုံးပြုသကဲ့သို့ ဘိန်းသည် နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့်လည်း ဆက်နွယ်မှု ရှိနေပြန်သည်။ တခါတရံတွင် ဘိန်းကို ငွေကြေးအစားထိုး အသုံးပြုသကဲ့သို့ ဘိန်းသည် စုငွေပစ္စည်း အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပြန်သည်။
ပို၍အရေးကြီးသော အချက်တခုမှာ ဘိန်းစိုက်ခင်းများသည် ၎င်းတိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက် အဓိက ၀င်ငွေရ သီးနှံတခု ဖြစ်နေခြင်းပင်။ တနှစ်ပတ်လည်စာတွင် မိသားစုထမင်းစားရန်အတွက် ဆန်စပါးကို လေးလမှ ခြောက်လစာ အထိသာ ၎င်းတို့က စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ "ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် မိသားစု လိုအပ်ချက်များ၊ ကလေးပညာရေး စရိတ်၊ ကျန်းမာရေး စရိတ်၊ အစားအစာနှင့် အိမ်ထောင်စု လိုအပ်ချက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် ငွေကြေးရရှိ နိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွင်း ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများကို ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းက ကူညီ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်ဟု ပြည်သူများက မှတ်ယူကြသည်ဟု" TNI ၏ သုတေသနပညာရှင်တဦးက မှတ်တမ်းတင် ထားသည်။
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တားမြစ်လိုက်သည့်အတွက် ၀င်ငွေရအစားထိုးနည်းလမ်း တခုအဖြစ် ရှာဖွေရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ တလျောက်ရှိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနှင့် လောနိုင်ငံရှိ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက ယင်း ပြဿနာအတွက် အဖြေတခု ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ ဤအဖြေမှာ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တွင် စီးပွား ဖြစ် စိုက်ခင်းများ၊ အထူးသဖြင့် ရာဘာ၊ လက်ဖက်၊ ကြံနှင့် ဖရဲ စိုက်ခင်းများ အလွန်အမင်းတိုးများလာခဲ့ပြီး တရုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ၎င်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို တိုးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။ လောနိုင်ငံရှိ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၀ဒေသမှ အာဏာပိုင်များက ရာဘာခင်းများကို ဘိန်းအစားထိုး သီးနှံအဖြစ် စိုက်ပျိုး ရန် တွန်းအားပေးနေကြပြီး ရာဘာပင်စိုက်ပျိးရန်အတွက် မြေဧကမြောက်များစွာကို သီးသန့်ဖယ်ထား အသုံးပြုခဲ့ကြ သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် တောင်ဘက်ခြမ်းအပါအ၀င် ယင်းဒေသတခုလုံးသည် " ရာဘာခါးပတ် (Rubber Belt)" တခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားစေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
"၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ရာဘာထွက်နှုန်းက တဧကဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ကနေ ၅၀၀ အထိ ၀င်ငွေရရှိနိုင်တယ်။ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုက တဧကဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက်သာ ရနိုင်ပါတယ်" ဟု လောနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီတခု၏ ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ပြောသည်။ "အဲဒါကြောင့် ရာဘာပင်စိုက်တာဟာ စိတ်ကူးယဉ် စရာကောင်းတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရတဲ့ သီးနှံတခု ဖြစ်လာတယ်။ ရာဘာအပင်ဆိုတာ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ ကို ကယ်မနိုင်တဲ့ လက်နက် ပစ္စည်းတခုဆိုတာ အုပ်ချုပ်သူ တော်တော်များများက သဘောပေါက်လာကြပါတယ်"ဟု လည်း TNI သုတေသနပညာရှင်က ဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် ရာဘာစိုက်ခင်းများသည် ရေရှည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတခုဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရာဘာအတွက် အနာဂတ် ဈေးကွက်နှင့် ရာဘာဈေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်တွင်လည်း စိုးရိမ်ချက်များ ရှိနေရသေးသည်။ ယူနန်ပြည်နယ်၊ မြန်မာ ပြည် မြောက်ဘက်ခြမ်းနှင့် လောနိုင်ငံများတွင် ရာဘာပင် အကြီးအကျယ်တိုးမြှင့် စိုက်ပျိုးနေခြင်းအပေါ် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာ အထူးစိုးရိမ်မှုများလည်း ရှိနေကြသည်။
"ရာဘာပင်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့အရာတခုပါ" ဟု တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ဆစ်ဆောင်ပန္နား အပူပိုင်းရာသီ ရုက္ခဥယျာဉ် (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden) မှ ဟူဟွာဘင်း (Hu Huabin) က ရှင်းပြသည်။
"ဒါပေမယ့် အရမ်းကာရော စိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြဿနာ ရှိတယ်"ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
ဟူဟွာဘင်းက ပြောပြရာတွင် ရာဘာစိုက်ပျိုးခြင်းသည် မူလအစတွင် နိုင်ငံတော်ပိုင်ဥယျာဉ်များတွင်သာ စိုက်ပျိုး သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်တ၀န်း စိုက်ပျိုးခွင့်ပြုခဲ့သည့်အချိန်မှစ၍ ဒေသအတွင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်ဟု ဆို သည်။ "ဒေသအတွင်း မနက်ခင်း ပေါ်လာနေကြ မြူတွေသိပ်မကျတော့ဘူး ဆိုကတည်းက ရာဘာစိုက်ပျိုးခြင်း ကြောင့် ဒေသအတွင်းရာသီဥတုအပြောင်းအလဲအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေပါပြီ" ဟုသူက ဆိုခဲ့ပါသည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီများက ရာဘာစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးခြင်းတွင် အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလုပ်နေခြင်းနှင့် ရှိပြီးသား စိုက်ပျိုးမြေများကို စီးပွားရေးလုပ်ကွက်များအတွက် အသွင်ပြောင်းလိုက်ခြင်းကြောင့် ရှိပြီးသား စိုက်မြေ ပြဿနာကိုပါ ပို၍ ဆိုးရွားလာစေသည်။ အထူးသဖြင့် လူနည်းစု ဆင်ရဲသားရွာသားများအတွက် ပို၍ ခက်ခဲစေသည်ဟု ဆိုသည်။ ဆင်ရဲသားရွာသားများအဖို့ စိုက်ပျိုးရန် အလွန်ခက်ခဲသည့် မြေဖျင်းမြေညံ့များကိုသာ ရရှိကြပြီး ရာဘာစိုက် ခင်းများ တွင်လည်း လုပ်အားပေးရန်အတွက် ပုံမှန်ဆိုသလို အတင်းအဓမ္မ ချောဆွဲ ခံကြရပြန်သည်။
"ကျနော်အလုပ်လုပ်တဲ့ မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အိမ်ထောင်စုမှန်သမျှ ရာဘာစိုက်ခင်းမှာ လုပ်အားမပေးရတဲ့ အိမ် ထောင်စုရယ်လို့ တစုတလေတောင် မရှိပါဘူး၊ အတင်းအကျပ် ခိုင်းတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို လုပ်အားခ နည်း နည်းပါးပါးတော့ ပေးပါ တယ်" ဟု "၀" ဒေသအခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး လုပ်သား တဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
သို့သော် "၀" ဒေသအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော တခြားအကူအညီပေးရေးလုပ်သားတဦးကမူ ထိုကဲ့သို့ လုပ်အား ခပေးမှုတွင် အာမခံချက်မရှိဟု ဆိုသည်။ "ရာဘာစိုက်ခင်း မန်နေဂျာအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်၊ တော်တော်များ များက တော့ ဘာလခမှ မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အပြန်အလှန်အားဖြင့် သူတို့ အခွန်ပေးစရာတော့ မလိုတော့ဘူး၊ ပြဿနာက တော့ တကယ့်အကြီးကြီးပါ"ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ဒေသခံပြည်သူများသည် ဘိန်းပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသည့် ဆိုးကျိုးဒုက္ခများ ခံစားရခြင်း အပေါ်တွင်သာ စိတ်မကျေမချမ်းဖြစ်နေကြခြင်း မဟုတ်ပေ။ တခြား မကျေနပ်မှုများလည်း ရှိနေကြသည်။
"ကျနော်တို့ဒေသမှာ ဘိန်းမစိုက်ပျိုးရတားမြစ်ချက်ကို အဓိက လုပ်ရခြင်းက တရုတ်ပြည်က ဖိအားပေးလာလို့ပါ" ဟု မုန်းလားဒေသအတွင်းရှိ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် NDAA အဖွဲ့၏ ကိုယ်စားလှယ်တဦးက ဆိုခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့က ဘိန်းမစိုက်ပျိုးရ တားမြစ်ချက်လုပ်ငန်းကို ပထမဦးဆုံး စလုပ်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်နေတာတောင်မှ ကျနော်တို့ ဒေသကနေ တရုတ်ပြည်ကို ဘိန်းတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်များများစားစား ၀င်ရတာလဲလို့ ကျနော်တို့ကို သူတို့က အခု မေးနေပြီ" ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု တိုးမြင့်လာသည့်အပေါ်တွင် အထင်းသား စိုးရိမ် ပူပန်နေသည်။ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်မတော်သစ် (ကချင်) (NDA-K) ကဲ့သို့သော အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဖွဲ့များကို ၎င်း တို့ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသများအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုများ ရပ်စဲစေရန် တရုတ်နိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရာဇသံပေးထားပြီး လည်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ဘာသာ သီးသန့် စစ် တမ်းကောက်ယူမှုများလည်း ပြုလုပ်နေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တရိုးရှိ ယခင်က ဘိန်းဖြူစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ခဲ့သော ပြည်သူလူထုထံသို့ အရေးပေါ် ဆန်အကူ အညီများ ထောက်ပံ့ပေးနေဆဲ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုဒေသများအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ အကူအညီပေးသော ဘိန်းအစား ထိုး သီးနှံလုပ်ငန်းများသည် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကို အဓိကမျှော်ကိုးသည့် တရုတ် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ များမှ လာနေ ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစားထိုး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ခေါင်းစဉ်အောက်မှ တဆင့် ၎င်းတို့ဒေသအတွင်း လာရောက်လုပ်ကိုင်နေ ကြသော တရုတ် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်၍ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များက သိပ်တော့သဘောမတွေ့လှပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုကုမ္ပဏီ များ၏ ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများသည် အပေါင်းလက္ခဏာဆန်သော အကျိုးပြုမှုများ ရှိ မလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းတရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်များ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တရုတ် အစိုးရထံမှ ချေးငွေများ ရရှိကြသည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင်မူ သူတို့စီးပွားရေးသာ သူတို့လုပ်နေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ အများစုသော ဘိန်းစိုက်တောင်သူဦးကြီးများက ထိုစီမံချက်များမှ တစုံတရာအကျိုးအမြတ် ခံစားခွင့် မရှိကြသေးပေ။
ကျေးလက်နေပြည်သူများ လတ်တလော တွေ့ကြုံနေရသည့် ဘေးဒုက္ခအပေါ် ထပ်လောင်း ဒုက္ခမဖြစ်စေရေးကို ဟန့် တားရန် နှင့် ယနေ့အချိန်အထိ အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေခြင်းများကို တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်မှု မူဝါဒများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဦးတည်ရှေးရှု လုပ်ဆောင်သင့်လှပေသည်။ မူဝါဒများတွင် ရေ ရှည် အမြင်ရှိသင့်ပြီး ဘိန်းစိုက်တောင်သူများအတွက် အစားထိုး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများလည်း ဆောင် ရွက်ပေးရန် အထူးအာရုံထားသင့်သည်။ ယခုကဲ့သို့ အရေးကြီးသည့်အချိန်တွင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းက ရွှေ တြိဂံဒေသကို ပစ်ပယ်မထားရန် အထူးအရေးကြီးလှပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော နည်းလမ်းများမရှိပါက ဘိန်းဖြူ ထုတ် လုပ်မှုကျဆင်းနေခြင်းသည် တာရှည်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ပါကြောင်း။ ။
Tom Kramer ရေးသားသည့် Burma Daze ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။
တွမ်ကရေမာသည် Transnational Institute (TNI) ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဒီမိုကရေစီ အစီအစဉ်မှ သုတေသီ တဦး ဖြစ်သည်။ TNI ၏ လေ့လာချက်တခုဖြစ်သော " Withdrawal Symptoms Changees in the Southeast Asian Drugs Market" ကို အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.tni.org/drugs တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Monday, 17 November 2008 18:24 အောင်သက်ဝိုင်း
ရန်ကုန်မြို့၏ တရုတ်တန်းဟု အများက သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုကြသည့် လသာမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလ ကားလမ်းမကြီး ဘေးတလျှောက်တွင် ညနေခင်းအချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ကြေးအိုးဆီချက် ခေါက်ဆွဲဆိုင်များ၊လမ်းဘေး မုန့်ဆိုင် များ၊ အထည်ဆိုင်လေးများ၊ ရာပေါင်းများစွာသောဈေးသည်များ၊ လာရောက်စားသောက်ကြသူများနှင့် ဈေးဝယ် သူ များပြည့်နှက်နေသည်။
ရန်ကုန်မြို့ တနေရာတွင် တ၀မ်းတခါးအတွက် တောင်းရမ်း နေရသော အဘိုးအို နှင့် အဘွားအို (ဓာတ်ပုံ - အောင်သက်ဝိုင်း)
ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသည့်လူအုပ်ထဲတွင် ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ် ဆင်ဖုံကျေးရွာမှအသက်၇၈ နှစ်အရွယ် ဒေါ်အုန်းမြင့် ဆိုသည့်အမယ်အိုကြီး တဦးလည်းအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး သူမသည် တုန်တုန်ယင်ယင်နှင့် တလှမ်းချင်း လျှောက်လှမ်း နေသည်။ အမယ်အိုသည်ညစ်ထေးစုတ်ပြတ်နေသည့် အ၀တ်အစားကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး သေးကွေးကြုံလှီလှသော
သူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာမှာ လူအများကြားတွင် တရွေ့ရွေ့ ရွေ့လျားနေသည်။ သူမ၏လက်တဘက်တွင်ကား သေးငယ် လှသည့် နှီးဖာစုတ်လေးတခုကို ကိုင်ရင်းနှုတ်ကလည်း တစုံတခုကို တတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုလျက်ရှိသည်။
အမယ်အို၏နှုတ်ခမ်းဆီက တိုးတိုးသဲ့သဲ့ တုန်ရီစွာထွက်ပေါ်လာသည့်အသံမှာ“သားလေးတို့ သမီးလေးတို့ရယ် ထမင်းဖိုးလေး၊ ဟင်းဖိုးလေးများ သနားပါ”ဆိုသည့်အသံပင်။ သူမ၏ နှီးဖာစုတ်လေးထဲတွင် ဟောင်းနွမ်း စုတ် ပြတ်နေသည့် ၁၀ တန်၊၂၀ တန် နှင့် ၅၀ ကျပ်တန်ငွေအကြွေ စက္ကူလေးများက ဖရိုဖရဲ။
“အဘွားနေတဲ့အိမ်ကလေးက လေတွေတိုက်တုန်းက ပြိုသွားတယ်၊ အဘွားကတကောင်ကြွက်၊ အရင်တုန်း က ဈေးရောင်းတယ်၊ အသက်ကြီးလာတော့ ဈေးမရောင်းနိုင်တော့ဘူး၊ လေတိုက်လို့ပြိုသွားတဲ့အိမ်က ပြန်မဆောက် နိုင်တော့ သူများအိမ်မှာ ကပ်နေရတယ်”ဟု အမယ်အိုကလေသံအေးအေးနှင့်ရှင်းပြသည်။
၂၀၀၈ ခုနစ်မေလဆန်းပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့်နေအိမ်ပျက်စီး သွားပြီး ကယ်ကူသူမဲ့မုန်တိုင်းသင့်ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်နေရသော ဒေါ်အုန်းမြင့်မှာဆွေမျိုးအထောက်အပံ့မရှိ ခိုကိုးရာမဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်နေရသည့် သက်ကြီးရွယ်အို အမယ်အိုကြီးတဦး ဆိုလျှင်လည်းမမှားနိုင်ပေ။
ဒေါ်အုန်းမြင့်ကဲ့သို့ ကယ်သူမရှိ ခိုကိုးရာမဲ့ ဖြစ်နေသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုအမြောက်အမြား ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လမ်းမကြီးများပေါ်တွင်သာမကတခြားမြို့ပြဒေသကြီးများတွင်လည်း အရေအတွက်များစွာဖြင့် ရှိလာပါသည်။
မြန်မာ့ရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာအရ မိဘဘိုးဘွားများ အိုမင်းမစွမ်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာသောအခါ သားသမီး မြေးမြစ်များကပြန်လည်ပြုစုစောင့်ရှောက်ကြလေ့ရှိပြီး သားသမီးဆွေမျိုးအထောက်အပံ့မရှိခဲ့ပါက ရပ်ရွာလူ့ အဖွဲ့ အစည်းက အဘိုးအဘွားနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုစားဝတ်နေရေးလိုလေသေးမရှိ ထောက်ပံ့ ကူညီကြလေ့ ရှိခြင်းသည် ယဉ်ကျေးပျူငှာသောမြန်မာ့ဓလေ့စရိုက်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာတည်တံ့နေလာခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် စီးပွာရေးကြပ်တည်းပြီး အလုပ်အကိုင်ရှားပါးကာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကြုံရာကျပန်း ရုန်းကန် လုပ်ကိုင် စားသောက်ရသည့် စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင်မူ ထိုယဉ်ကျေးပျူငှာသော မြန်မာ့ဓလေ့များကွယ်ပျောက် ကာ သက်ကြီးရွယ်အိုဘိုးဘွားများမှာလည်း ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူမရှိကြုံရာကျပန်း အလုပ် ကြမ်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရင်း လမ်းမများပေါ်တွင်လေလွင့်တောင်းရမ်းစား သောက်ရသည့် အခြေ အနေသို့ ဆိုက်ရောက်သွားတော့သည်။
ပူပြင်းလှသည့် နေ့လယ်အချိန် ရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းအတွင်းရှိ ကတ္တရာလမ်းမကြီးပေါ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အို ဘိုးဘွားစုံတွဲတတွဲ အမိုးအကာမရှိငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည်။
အမယ်အိုနှင့် အဘိုးအိုမှာ အပူရှိန်ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနေသည့်အပြင် သူတို့၏အရိုးပေါ်အရေတင် ပုံစံက ဇရာကြောင့် ပိန်လှီခြင်းထက် အာဟာရမပြည့်ဝခြင်းကြောင့် ပိန်လှီနေသည့်ပုံစံပေါက်နေသည်။
သူတို့၏အရှေ့တွင် အညိုရောင် ယောဂီ အ၀တ်ခေါက်လေး တခုရှိနေပြီးအဆိုပါအ၀တ်ခေါက်ပုံလေးပေါ်တွင် ငွေစက္ကူလေးများက တွန့်ကြေလိမ်ခေါက်စွာရှိနေသည်။ အမယ်အိုနှင့် အဘိုးအိုကား ဒေါ်အုန်းမြင့်ကဲ့သို့ပင် တောင်းရမ်းစားသောက်နေရသူများပင် ဖြစ်သည်။
ယောဂီ တဘက် ၊ ယောဂီ လုံချည် လေးများဖြင့် တောင်းရမ်းနေသော အဘွားအို နှစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ - အောင်သက်ဝိုင်း)
“အမေတို့မှာသား ၂ ယောက်ရှိတယ်၊ ၂ ယောက်စလုံး ဆုံးသွားပြီ၊ သားအငယ်က စစ်သား၊ ၈၈ မတိုင်မီ အသက် ၂၀ အရွယ် မိုင်းဆတ်မှာ တိုက်ပွဲကျတယ်။ သားအကြီးကလည်း စက်ရုံဝန်ထမ်း စက်ညပ်ပြီး ဆုံးတယ်”ဟု ဒေါ်မြစိန် ဆိုသည့် အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် အမယ်အိုကပြောသည်။
ဒေါ်မြစိန်၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အဘိုးအိုမှာ လေသင်တုန်းဖြတ်မှုကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှုနှေးကွေးနေပြီး စကား လည်း မပြောနိုင်တော့ကြောင်း အမယ်အိုက ရှင်းပြသည်။
“ဆွေမျိုးတွေရှိပေမယ့် ကိုယ်လိုသူလို မရှိဆင်းရဲသားဆိုတော့ တယောက်ကိုတယောက်မကူညီနိုင်ကြဘူး၊ နေတာက အင်းစိန်မှာ”ဟု ဒေါ်မြစိန်ကသူတို့၏ဘ၀အကြောင်း ခပ်တိုတိုပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏လမ်းမကြီးများပေါ်တွင် ရောက်ရှိ တောင်းရမ်းစားသောက်နေရသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် မျက်စိကွယ်နေသူများ၊ လေဖြတ်နေသူများနှင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းသော အဘိုးအို၊ အဘွားအိုများပါဝင်ပြီး ဘ၀၏နောက်ဆုံး နေ၀င်ချိန်များကိုလမ်းများပေါ်တွင် ပင်ပန်းခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်းနေရကြောင်း ပြည်တွင်း လူမှုရေးဆိုင်ရာNGO တခုမှ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတဦးကပြောသည်။
“လမ်းမတွေမှာ အလှူခံလှည့်လည်နေတဲ့ ဂီလာနသက်ကြီးရွယ်အို အဘိုးအဘွားတွေ များလာတာကို သတိ ထား မိတယ်၊ သိရသလောက် အများစုကတော့ စီးပွားရေးမပြေလည်လို့ဒီလိုဖြစ်လာကြတာ၊ တချို့ဆိုရင် သားသမီး ရှိပင်သော်ငြား စီးပွားရေးက လုံးဝအဆင်မပြေတော့ မိဘကိုတောင် မကျွေးမွေးနိုင်ဘူး၊ အဲဒီတော့ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေလည်း လမ်းပေါ်ရောက်လာကြရတယ်” ဟု အဆိုပါစာရေးဆရာကဆိုသည်။
စစ်အစိုးရလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန စာရင်းဇယားများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက် ၆၀ နှင့်အထက် ဘိုးဘွားဦးရေ ၄.၇ သန်းရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ လမ်းမများတွင်တောင်းရမ်း စားသောက်နေရသည့် ခိုကိုးရာမဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ဆင်းရဲမှုကြောင့် ကြုံရာကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော ဇရာအရွယ် ဘိုးဘွားများ သောင်းဂဏန်းများစွာရှိနိုင်ကြောင်းလည်း
“ဈေးတွေမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့ အဘွားအိုတွေ၊ အမှိုက်သိမ်းတဲ့ အဘွားကြီးတွေ တော်တော်များများ ရှိလာတယ်၊ လမ်းတွေပေါ်မှာ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည် အဘွားအိုတွေ နေရာတော်တော် များများမှာ တွေ့လာရတယ်” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ဂျာနယ်သတင်းထောက် တဦးကပြောကြားသည်။
လမ်းမပေါ်ရောက်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ဆင်းရဲပင်ပန်းစွာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသော ဇရာ အရွယ်အို နိုင်ငံသားများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်အပြည့်အ၀ရှိသူမှာ အုပ်ချူပ်သူအစိုးရပင် ဖြစ်လင့်ကစား
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချူပ်နေသော စစ်အစိုးရမှာ ထိုတာဝန်များကို ပျက်ကွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်မှ ၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီးတဦးက ပြောသည်။
“သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆိုတာ Senior Citizen တွေပဲ၊ ဒီ လူတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်အရှိဆုံးသူဟာ နိုင်ငံအုပ်ချူပ်တဲ့ အစိုးရပဲ၊ Senior Citizen တွေ လမ်းပေါ်ရောက်ကုန်တယ်၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ နေ၀င်ချိန်ကို ကုန်ဆုံးရတယ်ဆိုရင် တာဝန်အရှိဆုံးသူက အစိုးရပဲ”ဟု အဆိုပါသတင်းစာဆရာကပြောသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် သာမန်အရပ်သား သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပြုစုစောင့်ရှောက်မှု မပေးနိုင်ရုံမက အစိုးရ၀န်ထမ်း အငြိမ်းစားသက်ကြီးရွယ်အိုများ၏နောက်ဆုံးဘ၀နေ၀င်ချိန်များကိုပင် အာမခံချက် မပေးနိုင်ဘဲ ခက်ခဲပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာကုန်ဆုံးစေသည့်အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်း အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများ ကပြောသည်။
“အဘက စက်မှု ၁ အထည်အလိပ်စက်ရုံမှာလုပ်ခဲ့တာ၊ ၁၉၉၂ ခုနစ်မှာဆေးလက်မှတ်နဲ့ အငြိမ်းစားယူတယ်၊ အဘအခု တလကို ပင်စင်လစာ တလ ၇၆၈ ကျပ်ရတယ်”ဟု လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ရှိ စက်ရုံတခုတွင် ညစောင့် လုံခြုံရေးဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသည့် အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် အဘိုးအိုတဦးကပြောပြသည်။
တပ်မတော်လေတွင် အရာခံဗိုလ်အဆင့်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် အငြိမ်းစားအရာရှိ တဦးကလည်း သာမန်အောက်ခြေအဆင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူရသောအခါ စားဝတ် နေရေးအလွန်ကြပ်တည်းပြီး အေးချမ်းစွာအနားမယူနိုင်ဘဲ ရရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရလေ့ရှိကြောင်း ပြောပြသည်။
“အောက်ခြေအစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တုန်းကလည်း စားဝတ်နေရေး အရမ်းကြပ်တည်း ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၀န်ထမ်းဖြစ်နေတုန်းကတော့လိုတဲ့ငွေ ဟိုကလှည့်၊ ဒီကလှည့်နဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီး လို့ရသေးတယ်၊ အငြိမ်းစားယူတဲ့ အချိန်ကျတော့ ငွေဝင်ပေါက်မရှိတော့ မဖြစ်မနေ အလုပ်ထွက်လုပ်ကိုလုပ်ရ တယ်”ဟုအဆိုပါ အငြိမ်းစားအရာရှိကပြောသည်။ ကိုယ့်ဝမ်းပူဆာ မနေသာတော့လည်း လမ်းမပေါ်တွင်ပင် ဈေးတောင်းချ ရောင်းနေရသော ဇရာအို အဘွား တဦး (ဓာတ်ပုံ - အောင်သက်ဝိုင်း)
တပ်မတော်တွင် နှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး အရာခံဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည့် တိုင်အောင် အငြိမ်းစားယူ သောအခါ ပင်စင်လစာ တလ ၇၀၀၀ ကျပ် သာရရှိကြောင်း ၄င်းကဆိုပါသည်။
“တလ ၇၀၀၀ ဘယ်လိုမှမလောက်ဘူး၊ ၇၀၀၀ ဆိုတဲ့ ငွေက ဒီခေတ်မှာ ဘာဆိုဘာမှ မဟုတ်တော့ဘူး” ဟု ထိုတပ်မတော်အငြိမ်းစားအရာရှိက ညည်းတွားသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် သာမန်အရပ်သားသက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်း အငြိမ်းစားဇရာအရွယ်ရောက် အဘိုးအဘွားများကိုအမှန်တကယ် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ပျက်ကွက်နေသော်ငြား အဘိုးအဘွားများ အရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း နှုတ်ကတိပေး ဟန်လုပ်ပြောကြားမှု ရှိနေပါသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချူပ် ဦးအောင်ထွန်းခိုင်က မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ အဘိုးအဘွားများကို အိမ်တိုင်ရာရောက်ပြုစုရှောက်ပြီး ကူညီ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ကူညီခြင်းကို ကုလသမဂ္ဂနှင့်အတူ ရေရှည်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးပြောကြားသည်။
“ဘိုးဘွားတွေထဲမှာ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ အထီးကျန်တဲ့သူတွေ၊ ၀င်ငွေပုံမှန်မရှိတဲ့သူတွေ စတဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ကို အဓိကဦးစားပေးအနေနဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်”ဟု ဦးအောင်ထွန်းခိုင်က ပြည်တွင်းအပတ်စဉ် ထုတ် ဂျာနယ်တခုတွင်ပြောကြားသည်။
အစိုးရ၏ပျက်ကွက်နေသော သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာပြည်သူလူထု တရပ်လုံးအနေနှင့် တာဝန်ယူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းထောက် တဦးက သုံးသပ်သည်။
“တာဝန်အရှိဆုံးအစိုးရတောင် ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ကျူပ်တို့ပြည်သူက ဘာအရေးစိုက်စရာလိုသလဲဆိုပြီး အဘိုး အဘွား တွေကို ပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီဘိုးဘွားတွေရဲ့ဘ၀ဆည်းဆာချိန်တွေက လမ်းတွေပေါ်မှာဖြစ်သလို
ကုန်ဆုံးသွားမှာပါ၊ ပြည်သူတဦးချင်းစီကအစ အားလုံးဝိုင်း လုပ်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်”ဟု ထိုသတင်းသမားက ပြောဆိုသည်။
ပြည်တွင်းNGO တခုမှ စာရေးဆရာမတဦးကမူ ပြည်သူများအချင်းချင်းစုပေါင်းစနစ်ဖြင့် တနိုင်တပိုင် ဘိုးဘွား ရိပ်သာလေးများ ထူထောင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုသည်။
“တတ်နိုင်သလောက် ရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့ ၀ိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် ဘိုးဘွားတွေအတွက် အများကြီးကောင်း လာမယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။
စစ်အစိုးရ လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချူပ် ဦးအောင်ထွန်းခိုင်၏အဆိုအရ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးတွင် ဘိုးဘွားရိပ်သာ ၅၉ ခုရှိပြီး ထိုဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသည့် အဘိုးအဘွားအရေအတွက်မှာ ၂၀၀၀ ကျော်သာရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Monday, 17 November 2008 သတင်း
ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မတိုက်ပွဲ" မပြီးသေးဟု လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများပြော
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 17 2008 19:37 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအား နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်နေသော်လည်း စစ်အစိုးရအနေဖြင့် အနိုင်ရသွားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း နယူးဒေလီရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားသူများက ယုံကြည်ကြသည်။
ယနေ့ကျရောက်သည့် ၆၉ နှစ်မြောက် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြို့တော် နယူးဒေလီတွင် ကျင်းပသည့် အခမ်းအနား၌ သူတို့က တညီတညွတ်တည်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
"အခု လုပ်နေတာက မတရားဖမ်းဆီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ် အကျဉ်းချနေတာ။ အဲဒါ အဓမ္မ။ မတရားမှုဟာ ဥပဒေဖြစ်လာတဲ့အခါ တော်လှန်ပုန်ကန်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မတိုက်ပွဲက မပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ တိုက်ပွဲကို ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့အတူ တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်" ဟု အရှင် ဦးပညာသီရိက အခမ်းအနားတွင် မိန့်ကြားသည်။
ဦးပညာသီရိသည် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လင်တန် ရဲဘက်စခန်းမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည့် သံဃာတော်တပါး ဖြစ်သည်။
''ပြည်သူတရပ်လုံး လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် ရှေ့တန်းက သွေးချောင်းစီးတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကို ဦးဆောင်နေတာက ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်တယ်။ အာဏာရှင်တွေက ဘယ်လိုပဲ နှိမ်နင်းနေပါစေ တော်လှန်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် ဆက်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြအုံးမှာ ဖြစ်တယ်'' ဟု ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ (ANC) မှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) ကိုမောင်လူကြီးက ပြောသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး လှုပ်ရှားမှုအပြီး စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့သည့် ၈၈ ကျောင်းသားများ အများအပြားဖြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ် (ABSL) မှ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ကိုကျော်သန်းကလည်း ပြည်တွင်းရှိ ကျောင်းသားထုသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ဖိနှိပ်မှုကြားကပင် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုသာ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောသည်။
"ကျောင်းသားတွေကို ဒီမိုကရေစီ တောင်းရုံနဲ့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်တယ်။ ကမ္ဘာမှာ မကြုံဖူးတဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ခံနေရတယ်။ တိုက်ပွဲတွေက ဆက်ရှိနေတယ်။ ၆၅ နှစ် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချလိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းဇေယျာက '၆၅ နှစ်တဲ့လားကွာ' ဆိုတဲ့ စိန်ခေါ်တဲ့ စကားတွေက ကျောင်းသားထုတွေထဲမှာ ဗမာကျောင်းသားထုရဲ့ သတ္တိနဲ့ ပိုင်းဖြတ်မှုတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သဘော ရှိတယ်" ဟု ကိုကျော်သန်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများနေ့အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာပုံမှာ ၁၉၃၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် နာဇီဖက်ဆစ်များက ချက်ကိုစလို ဗက်ကီးယားနိုင်ငံအား သိမ်းပိုက်မှုနှင့် ဖက်ဆစ်ဝါဒကို ပရာဂ် (Prague) တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများက ရဲဝံ့စွာ အာခံခဲ့ကြရာ ကျောင်းသားတဦး ကျဆုံးခဲ့ပြီး ကျောင်းသား ၁၂ ဦးအား ခုံရုံးမှ အပြစ်ပေး ကွပ်မျက်ခဲ့သလို၊ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကျောင်းသားများအား ဖိနှိပ်ရေး အကျဉ်းစခန်းများသို့ ပို့ဆောင်ခံရမှုမှ စတင်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က နိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိ တက္ကသိုလ် ကောလိပ်များကိုလည်း ပိတ်ပစ်ခံခဲ့ရသည်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများ ကောင်စီမှ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ကို နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားများနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ အာဏာရှင်နှင့် ဖိနှိပ်မှု၊ သွေးစုတ်မှုများအား ဆန့်ကျင်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများက အခမ်းအနားများ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ခန့်မှ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်း ၁၆၀ ခန့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် International Union of Students ၊ International Union of Sodalist Youth နှင့် World Federation of Democratic youth က အခမ်းအနားများကို ဦးစီးကာ ပိုစတာများ၊ လက်ကမ်းစာစောင့်များ ထုတ်ဝေဖြန့်ဝေကာ နှစ်စဉ် ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုကိုကြီး အပါအ၀င် ခေါင်းဆောင် ၂၁ ဦးထက်မနည်း ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ်အထိ မြန်မာစစ်အစိုးရက ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့သလို၊ အခြားသော ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့သူ အန်အယ်ဒီ ပါတီဝင်များ၊ သံဃာတော်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးသမားများကိုလည်း နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။
ထိုင်းနယ်စပ်သို့ စစ်အစိုးရ လက်နက်ပစ္စည်းဖြည့် - လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ဖို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ဟု SSA ဥက္ကဌသုံးသပ်
Monday, 17 November 2008 14:05
စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပြည့်တင်ဆောင်သော စစ်အစိုးရ၏တရုတ်ဖြစ် တုန်းဖုန်းစစ်ယာဉ်တန်းများ သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းသို့ ရောက် လာရာ နယ်စပ်တလျောက် နအဖတို့လက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ရန်စီစဉ်နေမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ကြောင်း သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှုးကြီးယွက်စစ်က ပြောသည်။
ယခုလ ၉ ရက်နေ့က နအဖစစ်အစိုးရ၏ တုန်းဖုန်းစစ်ယာဉ်တန်း ၁၅ စီး တာ့ကော့တံတားဖြတ်သန်းသွားကြောင်း၊ မည်သည့်အရပ် သို့ ဆက်သွားမည်ကို မသိရကြောင်း အသက် ၄၀ ကျော် မိုင်းပြင်းဒေသခံ အမျိုးသား တစ်ဦးကပြောပြ သည်။
မိုင်းပြင်းအခြေစိုက် နအဖစစ်တပ်နှင့် အ၀င်အထွက်ရှိသူ အဆိုပါဒေသခံက “ ခဲယမ်းမီးကျောက်နဲ့ ကျည်ဆံတွေတဲ့။ ဒေသခံ နအဖှ အရာရှိငယ်တွေ ပြောတယ်။ လုံòခံရေးအက်စ်ကော့ဒ်က အယောက် ၂၀ လောက်ဘဲရှိတယ်။ လမ်းတလျောက် ကင်းတဲတွေ စစ်သား တွေ မိုင်ဝက် ၁ မိုင်အကွာ ၃-၄ ယောက် ၁ ဖွဲ့လုံòခံရေးပိုထူတယ်။ ဆင့်ဆိုခံရတဲ့ အရပ်သားတွေလဲ တွေ့ရတယ်တဲ့၊ အဲဒီနေ့က ထော်လာဂျီသမားတွေပြောပြတာ” ဟု ဆို၏။
၄င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ှ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှုးကြီးယွက်စစ်က “ထိုင်းနယ် စပ်တလျှောက် တာချီလိတ်၊ ဟိုမိန်း၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်တွေမှာ နအဖလက်နက်ကြီးတွေ လာထားမယ်လို့ ကြားရတာကြာပြီ။ ၁၂၀ မမနဲ့ ၁၅၀ မမ လို့ကြားရတယ်။ တပ်ဆင်မယ့်နေရာလည်း လုပ်ထားပြီးပြီတဲ့။ အခုလာတဲ့ ခဲယမ်းမီးကျောက်ကားတွေက လက်နက်ကြီး တပ်မယ့်ဟာနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သိပ်မကြာသေးခင်ကဘဲ မိုင်းဆတ်လေယာဉ်ကွင်းမှာ စစ်လေယာဉ် ထိန်းချုပ် တဲ့ ကွန်ပြူတာစက် တပ်ဆင်ထားပြီလို့ လဲကြားရတယ်” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြော၏။
၄င်းနှင့်ပါတ်သက်၍ နယ်စပ်မှ ထိုင်းအာဏာပိုင်တစ်ဦးက“ ၁၂၀ မမ ဆိုရင်တော့ SSA ကိုထိုးစစ်ဆင်တုန်းက သုံးတာ တွေ့ရတယ်။ ၁၅၀ မမ ဆိုရင် ဒါအဝေးပစ်ဘဲ။ သူတို့ ဘယ်ကိုပစ်မလဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ” ဟု ပြော၏။
သံလွင်အရှေ့ခြမ်းသို့ အဆိုပါစစ်ယာဉ်တန်းမရောက်လာမီ ၁ ရက်အလို ယခုလ ၈ ရက်နေ့ကလည်း ခလရ ၂၇၇ နှင့် ခလရ ၂၂၅ တို့က ကျိုင်းတုံ-နားကောင်းမူး ကားလမ်းတစ်လျှောက် လုံခြုံရေးချထားသည်ကို တွေ့ရပြီး ဒေသခံလူထုအားလည်း “လူကြီးလာမည်” ဟုသာ ပြောထား၏။ ထိုနောက်ပိုင်း မကြာမီ တစ်စီးလျင် လုံခြုံရေး ၅ ယောက်စီပါသည့်စစ်ယာဉ်တန်း ၅ စီးရောက်လာပြီး ပုံပါကျင်သို့ ၂ စီး၊ မိုင်းကဋ္ဌတ်သို့ ၂ စီး၊ နားကောင်းမူးသို့ ၁ စီး သွားသည်ဟုဆို၏။ သို့သော် ပုံပါကျင်ဒေသခံတစ်ဦးက “ဆောင်းတွင်းမို့လို့ စစ်သားတွေအတွက် အနွေးထည်တွေနဲ့ ရိက္ခာတွေ တင်လာတာတဲ့ ” ဟု စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြားသိရကြောင်း ပြောပြသည်။
Written by ကွန်းဟဒေ့
Monday, 17 November 2008 14:04
အထူးဒေသ ၄ သို့ နအဖတပ် ၀င်ရောက်အခြေချထိန်းချုပ်ရေးကို ဒေသခံလူထုက လက်မခံ
Monday, 17 November 2008 14:02
အပစ်ရပ် အထူးဒေသ4NDAA မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲအချို့ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက အရည်အချင်း ပြည့်မီစေရန် နအဖစစ်တပ်က လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမည်၊ မိုင်းလားအထူးဒေသ ၄ သို့ နအဖစစ်တပ် ၀င်ရောက်ထိန်းချုပ်မည်ကို ဒေသခံလူထုနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ရန် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၆ နှင့် ၁၇ ရက်နေ့က တြိဂံစစ်တိုင်းမှုး ဗိုလ်ချုပ် ကျော်ဖြိုးနှင့်အဖွဲ့ UWSA အပစ်ရပ် ၀တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေ မိုင်းပေါက်သို့ သွားရောက်ကျောသပ် ဆွေးနွေးစည်းရုံးပြီး မိုင်းလားသို့ တက်သွား၍ အထူးဒေသ ၄ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ၃-၄ ယောက်အား ကျိုင်းတုံသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်ဟုဆို၏။
“ ၁၈ ရက်က ကျော်ဖြိုးနဲ့ မိုင်းလားခေါင်းဆောင် ၃-၄ ယောက် ကျိုင်းတုံကို ပြန်ရောက်တယ်။ ဥက္ကဌကြီး ဦးစိုင်းလင်းတော့ မပါဘူး။ စရဖ၀န်ချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်နဲ့ ကျိုင်းတုံမှာ တွေ့တယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းဆွေးနွေးတော့ မိုင်းလားအဖွဲ့ ခေါင်း ဆောင်တွေက “နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ဖို့ လက်ခံစဉ်းစားထားမယ်။ အခုချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူး။ ဌာနချုပ်ပြန်ပြီး ဆွေးနွေး ရဦးမယ်” လို့ပြန်ဖြေတယ် တဲ့”-ဟု မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည့် ကျိုင်းတုံဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောပြ၏။
အကယ်၍ ပါတီထောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို ဒေသခံများလက်မခံနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ကျိုင်းတုံဒေသခံက-“ NDAA ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့စကားအရ- မိုင်းလားဒေသမှာ နအဖစစ်တပ် ထိန်းချုပ်မှာကို ပြည်သူလူထုက လက်မခံဘူး။ ပညာမတတ်တဲ့ အရာရှိတွေကို ရာထူးကဖြုတ်ပစ်မယ်။ နအဖစစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ အစားထိုး ကိုင်ခိုင်းမယ်ဆိုတာလည်း လက်မခံဘူး။ ဒေသခံလူထုက စစ်တပ်နဲ့အတူ တလျောက်လုံး ဒုက္ခခံလာခဲ့ရပြီဆိုတော့ NDAA ခေါင်းဆောင် တွေအနေနဲ့ လူထုကို လစ်လျူရှုမထားနိုင်ဘူး- လို့ပြောတယ်” ဟု ဆို၏။
“ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ဘယ်လောက်ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပါစေ လက်နက်ချဖို့ဆိုတာတော့ တခွန်းမှမပါဘူး” ဟု အဆိုပါခေါင်းဆောင် ကပြောကြောင်း ကျိုင်းတုံဒေသခံက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
တရုတ်နယ်စပ် ဌာနချုပ်အခြေစိုက် မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ၀ပြည်သွေးစည်းညီဍွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA၊ ကိုးကန့် MNDAA အဖွဲ့နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ NDAA တို့သည် ၁၉၈၉ ကတည်းက ဖွဲ့စည်းသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီတပ်ဦး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့သည် “ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးကိစ္စများတွင် အချင်းချင်းဆွေးနွေး တိုင်ပင်ညိနှိုင်းပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်မည်” ဟု သဘောတူထားကြသော်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီထောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်မိုင်းလားကလက်ခံစဉ်းစားလိုက်ခြင်းမှာ နိုင်ငံရေး စိတ်မ၀င်စားသော အကြီးအကဲများ၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးအတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်အစိုးရထံ ဦးမညွတ်လိုသည့် ခေါင်းဆောင် အချို့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့မှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိကြောင်း နယ်စပ်မှနိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးလေ့လာ သူတစ်ဦးက သုံးသပ်ပြောဆို သည်။
ထူးခြားချက်မှာ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ နှင့် တစည ပါတီ တို့က နိုင်ငံနှင့်အ၀ှမ်း ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရန် အဆင့်သင့်ဖြစ်နေ ပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်အစိုးရသည် ယခုချိန်အထိ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် မဲဆန္ဒနယ် မသတ်မှတ်ရသေးပေ။
“ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို သူတို့မထုတ်ပြန်သေးတာက - နေပြည်တော်ထိပ်သီးတွေ အပစ်ရပ်အဖွဲ့အချို့ရဲ့ မတင်မကျ အခြေ အနေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့ ဖြစ်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုးကန့်အဖွဲ့ဆိုရင် လောက်ကိုင်နဲ့ ကုန်းကျန်း၊ ၀ ဆိုရင်ဟိုပန်၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်း နဲ့ ပန်ဆန်း္မမ့နယ်၊ မိုင်းလားအဖွဲ့ဆိုရင် ကျိုင်းတုံခရိုင် အရှေ့မြောက်ခြမ်း။ ဒီဒေသတွေကို အပစ်ရပ် ၃ ဖွဲ့ ထိန်းချုပ် ထားတယ် ဆိုတော့ သူတို့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ခြေများတာပေါ့ ”- ဟု နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးလေ့လာ သူက ဆက်လက်သုံးသပ်ပြသည်။
တဖက်တလမ်းကလည်း စစ်အစိုးရနှင့် ၀ တပ်ဖွဲ့တို့ မှာ - ၁၉၈၀ က မဆလတပ် သိမ်းပိုက်ခဲ့သော မက်မန်း္မမ့နယ်ခေါ် မော်ဖှ ဒေသနှင့် (ယခင် မိုင်းယန်း္မမ့နယ်အတွင်းပါဝင်သော) မိုင်းပေါက် လဲလှယ်ရေးပြဿနာ မပြီးပြတ်သေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆို၏။ ၀တပ်ဖွဲ့၏မိုင်းပေါက်ကို စစ်အစိုးရက မက်မန်းနှင့်လဲလိုသော်လည်း မိုင်းပေါက်မှာ ပန်ဆန်းဌာနချုပ်အတွက် မဟာမိတ် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ နှင့် မဲခေါင်မြစ်သို့သွားသော အဓိကလမ်းကြောင်း တံခါးပေါက်ဖြစ်နေသဖြင့် ၀တပ်ဖွဲ့အဖို့လက်မလွတ်လိုခြင်းဖြစ် သည်။ အဆိုပါနယ်မြေများတို့သည် ယခင် (၁၉၈၆-၁၉၈၉) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိန်းချုပ်နယ်မြေများဖြစ်ပြီး ၁၉၈၈ မဲဆန္ဒ နယ်သတ်မှတ်ချိန်တွင် စာရင်းထဲမပါရှိပေ။
အပစ်ရပ် အထူးဒေသ4NDAA မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလင်း (အသက် ၆၂ နှစ်) မှာ တရုတ်ပြည် ၀မ်းတိန့်မြို့ မျက်နှာချင်း ဆိုင် ပန်ဆိုင်းဇာတိ သျှမ်း-ကွမ်းတုံ သွေးနှောတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ၄င်းတွင် သျှမ်းနှင့် အခါလူမျိုး လက်ထောက် ၂ ယောက် ရှိပြီး အတွင်းရေးမှူးမှာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်ဟောင်း (ကချင်ပြည် ဗန်းမော်တရုတ်) ဦးမင်းအိမ် ဆိုသူဖြစ်သည်။
တရုတ် နယ်စပ်၌ မြန်မာငွေဈေးများ ကျဆင်း၍ ကုန်သည်များနစ်နာနေ
Monday, 17 November 2008 13:56
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ကျပ်ငွေတန်ဖိုး နိမ့်ကျနေမှုကြောင့် မြန်မာကုန်သည်များ နစ်နာ နေရသည်ဟု နယ်စပ်ရှိ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ ဦးဆောင် အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
ယခင်က မြန်မာငွေ ကျပ်တစ်ထောင်လျှင် တရုတ်ငွေ ၆ယွန်ရှိရာမှ ယခု ၅.၂၅ ယွန် ဈေးသာရှိတော့သဖြင့် ငွေလှဲနှုန်း အရ ကျပ်တစ်ထောင်လျှင် ၁၅၀ ကျပ်ခန့် နစ်နာကြောင်း ၎င်းက ယခုလို ပြောသည်။
" အခုက ကျနော်တို့က ဒီမှာတစ်လကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ အဲ ၆ယွန်နဲ့ ၅ယွန်ကြား ထဲမှာ ကစားတာလေ ငွေဈေးကတော့၊ အခုကတော့ ၅၂၅ ပေါ့။ ၅ ကျပ်နဲ့ ၂၅ ပြားဆိုရင် မြန်မာငွေ တစ်ထောင်ရတာပေါ့။ ဟိုတုန်းကတော့ ၆ ကျပ် ၅၈၊ ၅၇ အဲလိုလေးတွေ ဖြစ်တယ်။ ၅နဲ့၆ ကြားထဲမှာ ကစားတာ ဒါပေမယ့် အရောင်းအ၀ယ်ကတော့ ပါးပါတယ်။ ဒီဘက်မှာ အနည်းဆုံးမြန်မာငွေ ဥပမာ ဟိုတုန်းက ခြောက်ယွန်ပေးလိုက်ရင် မြန်မာငွေ တစ်ထောင်လေ။ အဲအခုကတော့ ၅၂၅ ဆိုရင် မြန်မာငွေ ၁၅၀ လောက်တော့ နစ်နာတာပေါ့။"
တရုတ်ပြည် အိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလအတွင်း၌ နှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်သွားလာရေးကိစ္စများ ခက်ခဲ၍ မြန်မာကုန်ပစ္စည်း များ တရုတ်ပြည်သို့တင်သွင်းမှု နည်းပါးချိန်မှစ၍ ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
"လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအရ ဒီမှာအရောင်းအ၀ယ် နည်းနည်းပါးတယ်လေ။ ပါးတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ကြား ထဲမှာ အိုလံပစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာလေ၊ အဲဒီ အိုလံပစ်မှာလဲ ဒီကကုန်သည်တွေက ပြည်ကြီးမှာ သွားရောင်းလို့မရဘူး အရောင်းအ၀ယ်သွား လုပ်လို့မရဘူးလေ။ လတ်တလောမှာ အမေရိ ကန်ကဘဏ် ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာတယ်လေ ပေါ်လာတဲ့ အခါကျတော့ ပစ္စည်းတွေက မ၀ယ်ကြတော့ဘူး လေ"
တားမြစ်ထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများမှလွဲ၍ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်များကို နှစ်နိုင်ငံ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခွင့် ရှိသော်လည်း မြန်မာကုန်သည်များအနေဖြင့် ၀ယ်ဈေးနှင့် ရောင်းဈေး ကိုက်ညီမှု မရှိသည့်အတွက် အခက်ကြုံ နေကြသည်။
ငွေလဲနှုန်းကျဆင်းနေခြင်းသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ကျဆင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ကုန်ဝယ်လိုအား ကျဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ငွေကြေးဈေးကွက် လေ့လာသူ တစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်မှုကြောင့် အိုင်ဒီပီတိုးပွား၍ ပိုမိုဒုက္ခရောက်
Monday, 17 November 2008 13:55
ကရင်နီဲပြည်နယ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရတို့၏ ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်မှုများကြောင့် နိုင်ငံတွင်းအခြေမဲ့ လှည့်လှည်နေထိုင်သူ(အိုင်ဒီပီ)များ ပိုမိုများပြားလာပြီး စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကိုလည်း ပိုမိုရင်ဆိုင်လာကြသည်ဟုကရင်နီ သဘာပါတ်ဝင်းကျင် (အဲဗားကရင်း) အဖွဲ့က ဆိုသည်။
ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ကရင်နီအိုင်ဒီပီများ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရသော ဒေသများ၌ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပေးအစီအစဉ်များဝေငှ၍ အိုင်ဒီပီတို့၏ ခက်ခဲမှုအခြေအနေမှန်များအား လေ့လာ၍ ယခုလိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရတပ်များက အိုင်ဒီပီများကို တွေ့ရှိပါက ၎င်းတို့၏ ပစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိုင်ဒီပီများသည် ကရင်နီတပ်မတော်များနှင့် အဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်၍ သတင်းများပေးပို့နေသည်ဟု ဆိုသည့် မသင်္ကာမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု (အဲဗားကရင်း) အဖွဲ့တာဝန်ခံ ခူးညေးရယ်က ပြောသည်။
၎င်းက "စစ်အစိုးရတပ်တွေက အထူးသဖြင့် အိုင်ဒီပီတွေ နေထိုင်တဲ့ နေရာတွေဆို သူတို့ Free Fire Zone လို့ သတ်မှတ်ထားတယ်လေ၊ ပစ်ခွင့်ရနယ်မြေဆိုတော့ အကယ်၍ သူတို့ အိုင်ဒီပီတွေကို တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်း ပစ်သတ်လို့လည်း ရတယ်ပေါ့၊ အထက်က ပစ်မိန့်ပေးထားတယ် အဲမျိုးလေ၊" ဟု ပြောသည်။
လတ်တလော ကရင်နီပြည်တွင်းရှိ အခြေမဲ့မှုများ ဖြစ်နေကြသော ကရင်နီပြည်သူများသည် စားဝတ်နေရေး အကျပ်အတည်းများ၊ ခိုလှုံနေထိုင်ရန် ဘ၀လုံခြုံမှု အကာအကွယ်မဲ့ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါများမရှိခြင်းနှင့် သားသမီးပညာရေးများအတွက် အခက်အခဲရှိခြင်းများကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသည်ဟု ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရတို့၏ ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်သည် ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (ကေအဲန်ပီပီ)အား ထောက်ခံအားပေးနေသော ပြည်သူလူထုများအား တိုက်ခိုက်ခြေမုန်းသော နည်းစနစ်တခုဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ပီပီ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ခူဦးရယ်က ပြောသည်။
"အစက စစ်အစိုးရတွေဟာ သူတို့ဖြတ်လေးဖြတ်လုပ်တာ ကျေးရွာတွေ စုစည်းချုပ်နှောင်တယ်၊ ပြည်သူလူထုတွေကို သူတို့မူရင်းကျေးရွာကနေ မောင်းထုတ်တယ်၊ မြို့ထဲသို့ မြို့ရှိရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခိုင်းတယ် အဲလိုမျိုးလုပ်တော့ တချို့လူတွေက မြို့ရှိရာသို့ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်တယ်၊ တချို့က တောထဲသို့ ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေတယ်၊ တချို့လူတွေက နယ်စပ်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာကြရတယ်" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရတပ်များ၏ ကျေးရွားများ မီးရှိုးဖျက်ဆီးမှု၊ ပြည်သူလူထုများ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုနှင့် မူရင်းနေရာဒေသ ကျေးရွားများမှ အတင်းအကြပ် မောင်းထုတ်ခံရခြင်းကြောင့် ကြောက်ရွံ့၍ ထွက်ပြေးရခြင်းဖြင့် အိုင်ဒီပီများ ဖြစ်လာရခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသွားသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်များအား ကူညီထောက်ပံရေးအဖွဲ့၏ ယခုနှစ် နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအရ ကရင်နီပြည်တွင် အိုင်ဒီပီပေါင်း ၅၃၃၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းတွင် တောပုန်းရွာများ အခြေမဲ့သူများ၏ နေထိုင်သော မြို့နယ်များမှာ ရှားတော၊ ဖရိုဆိုနှင့် ဖါဆောင်းတို့ဖြစ်ကာ အိုင်ဒီပီပေါင်း ၉၃၀၀ ရှိပြီး ရွှေ့ပြောင်းစခန်းများ အခြေမဲ့သူများ၏ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သော မြို့များမှာ လွိုင်ကောင်၊ ရှားတောနှင့် ဘောလခဲတို့ ဖြစ်၍ လူဦးရေပေါင်း ၅၀၀၀ ရှိသည်။
ထို့အပြင် အပစ်ရပ်ဒေသရှိ အခြေမဲ့သူပေါင်း ၃၉၀၀၀ တို့သည် လွိုင်ကောင်၊ ဒီမောဆို၊ ဖရိုဆို၊ ဖါဆောင်း၊ ဘောလခဲနှင့် မယ်စဲမြို့နယ်ရှိ နေရာဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည်။
Monday, 17 November 2008 13:52
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ၅ ရက်နေ့က အင်းအား (၃၀) ရှိ ကရင်နီအမှတ် (၃) ခရိုင် လုပ်ရှားတပ်စုသည် အင်အား(၂၀)၀န်းကျင်ခန့်ရှိသည့် မြန်မာစစ်တပ်ခမရ ၄၂၇ အား ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ဟိုယာအုပ်စု အတွင်းရှိဖယ်ခူ ကျေးရွာတွင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ စစ်တပ်ဘက်မှ တပ်စိတ်မှူးတဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု ကရင်နီတပ်မတော်ဘက်ကပြောသည်။
ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသော စစ်တပ်ဘက်မှ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ဖယ်ခူကျေးရွာမှရွာသား ၂၀ ဦးအား တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ရာ ရွာသားသုံးဦးအသက်ဆုံးရုံးသွားသည်ဟု ကရင်နီတပ်မတော် ဗျူဟာမှူး ၁ ခူးဘျားရယ်က ပြောသည်။
ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အချက်အလက်အချို့ သိရှိထားသူ ကေအက်စ်ဒဘလျူဒီစီမှ ကိုခူဂေက "ကျနော်တို့ အနောက်ဘက်ကမ်းရွာမှာဆို စစ်သားဆိုတာ အမြဲတမ်း ထားထားတာလေ။ စစ်သားက ရွာစောင့်ပေါ့။ ကျနော်ထင်တာ အဲဒီရက်မှာက ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတာက ဒီဘော်ရယ်နဲ့ မန်းလောတို့က အဲဒီရွာအတွက် လုံခြုံရေး ရွာစောင့်အလှည့်ကျတယ် ထင်တယ်။ ရွာစောင့်အလှည့်ကျတဲ့ အချိန်မှာမှ ကရင်နီက ၀င်ပစ်လိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာ အပြစ်ပုံချလိုက်တဲ့ သဘောမျိုးပေါ့၊" ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံစီးပွားရေး ကျဆင်းနေဟု ဂျပန်အစိုးရ တရားဝင်ထုတ်ပြန်
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးကျဆင်းနေတယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့
အစိုးရရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အခုနှစ် တတိယလေးလပတ်အတွင်းမှာ ဂျပန်
စီးပွားရေးဟာ ၀.၁% လျော့ကျသွားတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်
မှာ စီးပွားအင်အားအကြီးဆုံး ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ် ဒုတိယလေးလပတ် ကာလမှာကတည်းက စီးပွားရေးကျဆင်းတာ ကြုံခဲ့ရတာ
ကမ္ဘာ့ငွေကြေး အကျပ်အတည်း အခြေအနေနဲ့ အတူပဲ အခုလို ဂျပန်အပါအ၀င် ကမ္ဘာ
ပေါ်က စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပေါ် အကြီးအကျယ် ရိုက်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါ
တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင် ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် စီးပွားရေး
နှစ်တနှစ်ရဲ့ လေးလပတ်ကာလ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်မှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အနုတ်
လက္ခဏာပြလာပြီဆိုရင် အခုလို စီးပွားရေးကျဆင်းတယ်လို့ သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက် သီတင်းပတ်အတွင်းကတော့ ဥရောပ ယူရိုငွေသုံးတဲ့ နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံ
စီးပွားရေးဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ဥရောပသမဂ္ဂက တရားဝင်
ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အလားတူပဲ အမေရိကန်စီးပွားရေးဟာ အကျဘက်ကို ဦးတည်နေ
တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူအတော်များများက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးကျားကန်မှု အစီအစဉ် မအောင်မမြင်ဖြစ်တယ်
လို့ ဂျပန်လူထုက ယူဆတာကြောင့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် တာရို အာဆို အစိုးရအဖွဲ့အပေါ်
လူထုထောက်ခံမှုဟာ ၃၀% အောက်အထိကို ကျဆင်းသွားပါတယ်။
နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ထောင်ဒဏ်စီရင်ချက်ချ၊ နယ်ထောင်တွေပို့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသူတွေကို အခု
ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထောင်ဒဏ်တွေ ချနေရာမှာ ဒီနေ့မှာလည်း
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ
ကိုထင်ကျော် အပါအ၀င် ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုမှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ သံဃာတော်
တွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ထောင်ဒဏ်တွေ ချနေပါတယ်။ သူတို့ကို ထောင်ချ
တဲ့အခါမှာလည်း တရားလက်လွတ် ပြစ်ဒဏ်တွေပေးနေတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက
ပြောနေကြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒီနေ့ အမိန့်ချမှတ်တဲ့အထဲမှာ စက်တင်ဘာ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပြီး တနှစ်ကြာ
လောက် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ သံဃာတော်နှစ်ပါးလည်း အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့အထဲမှာ
ပါပါတယ်။ မြောက်ဥက္ကလာပ ကျောင်းတိုက်တခုက အရှင်ဆန္ဒာဝရနဲ့ အရှင်ခေမာဝံသ
တို့ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်တဦးက အခုလို
"လူနာမည်က ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ၈ နှစ်နဲ့ ၆ လ၊ တာမွေတရားရုံး၊ ပုဒ်မက ၁၄၃၊ ၁၄၅၊
၁၄၇၊ ၂၉၅(က)၊ ၅၀၅(ခ)၊ အားလုံးပုဒ်မတခုကို ၂ နှစ်ဆီနဲ့ ၅၀၅(ခ) ကတော့
"မြောက်ဥက္ကလာ ဘုန်းကြီးကျောင်းက။ နောက်တပါးက အရှင်ခေမာဝံသ၊ သူကတော့
၁၁ နှစ်။ အထူးရုံးမှာချတာ။"
သံဃာနှစ်ပါး ဒီနေ့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်ခံခဲ့ရသလိုပဲ သံဃာတွေနဲ့အတူ
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါခဲ့ကြတဲ့ ဗကသ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား
သမဂ္ဂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း ဒီနေ့မှာ ထောင်ဒဏ်အသီးသီး ချမှတ်
လိုက်ပါတယ်။ ဒီအမှုတွဲထဲမှာပါဝင်ပြီး ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုသိန်းဆွေရဲ့
ဖခင် ဦးမြင့်ဆွေက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
"စည်သူမောင်က ၁၀ နှစ်၊ ရဲမြတ်ဟိန်းက ၁၀ နှစ်။ သမဂ္ဂဖွဲ့တဲ့အမှုပါ ပေါင်းပြီးချလိုက်
တာ။ စည်သူမောင်ပါ ၇ ဦးက ၁၄၃၊ ၁၄၇၊ ၁၄၅၊ ၅၀၅(ခ)၊ အဲဒါအားလုံး ၆ နှစ်ခွဲ
အပြည့်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စည်သူမောင်ကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ၅ နှစ်ချတယ်။ ဒါပေမယ့် စည်သူမောင်နဲ့ ရဲမြတ်ဟိန်းက ငယ်တဲ့အတွက်
ဆိုပြီး ၆ နှစ်ခွဲက ၁ နှစ်ခွဲဆီ ပြန်လျှော့လိုက်တယ်။ လျှော့ပြီးတော့ ၅ နှစ်၊ ဟိုဘက်က
၅ နှစ်ဆိုတော့ ၁၀ နှစ် ဖြစ်သွားတာပေါ့။ သားကြီးကတော့ ၆ နှစ်ခွဲပဲ။"
အခု ထောင်ချတော့ရော ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေပါ ထုချေခွင့်ရလား။
"ကျနော်တို့အကျိုးဆောင် ဦးအောင်သိန်းက မရှိတော့ဘူး။ ဦးအောင်သိန်း ၄ လ မကျ
ခင်မှာ နောက်တိုးလိုပြသက်သေကို စစ်တဲ့အခါကျတော့ သူက ဒီအမှုကိုလည်း မသိဘူး၊
မှုခင်းသတင်းတပ်ဖွဲ့က ရေးပေးတယ်၊ အဲဒီအတိုင်း သူလာထွက်တယ်။ နောက်တခါ
ဘာတွေထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း စာရေးပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူက တရားရုံး
"ဖွင့်ပြောတော့ ဦးအောင်သိန်းက ဒါတွေကို မှတ်တမ်းတင်တယ်။ မှတ်တမ်းတင်ပြီး
တော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မတရားသက်သေ လာထွက်တဲ့အတွက် သူ့ကို တရားစွဲသင့်ပါတယ်၊
ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်း တရားရုံးကနေပြီးတော့ သက်သေအဖြစ် လက်ခံပါဆို
တော့ တရားသူကြီးက လုံးဝလက်မခံဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ကို မတရားသက်သေအဖြစ်
တရားစွဲဖို့ကိစ္စကိုလည်း တရားသူကြီးက ပယ်ချလိုက်တယ်။ နောက်တခုက ကျနော်တို့
ကလေးတွေ၊ သားသမီးတွေ အားလုံး နစ်နာတဲ့တချက်ကတော့ တရားခံပြသက်သေကို
ဒီနေ့ အမိန့်ချတဲ့နေရာမှာရော ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေ ရှိလား၊ အန်ကယ်တို့မိသားစုတွေ
"မရပါဘူး။ ရှေ့နေရှေ့ရပ် ရှိမရှိတော့ ကျနော် မသိပါဘူး။ ကျနော်လည်း မစောင့်နိုင်
သက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေကိုရော အာဏာပိုင်တွေဘက်က အခုလိုထောင်ချတာ
ဒီနေ့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့အထဲမှာ ရဟန်းတွေ၊ ကျောင်းသားတွေတင်မဟုတ်ဘဲ
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လတုန်းက ဆန္ဒပြလို့ အဖမ်းခံခဲ့
ရတဲ့ ကိုထင်ကျော်လည်း ပါပါတယ်။ ကိုထင်ကျော် ထောင်ချခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ တခြား ဒီနေ့
ထောင်ပြောင်းအခြေအနေတွေကို အန်န်အယ်လ်ဒီလူငယ်တဦးက အခုလိုရှင်းပြထား
"ကိုထင်ကျော် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးက ၁၂ နှစ်နဲ့ ၆ လ။ အထူးရုံးထဲမှာ ချတာ။
သံဃာတော်တွေက ထောင်ပြောင်းတာပေါ့။ ဦးစန္ဒာသီရိခေါ် နိုင်လင်း၊ သူက အေးမြ
ဂုဏ်ရည်ရိပ်သာကျောင်းတိုက်၊ တောင်ဥက္ကလာက၊ သူက ၄ နှစ်ခွဲကျတာ ရွှေဘိုထောင်
ကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ နောက် ဦးဝိလာစက္က၊ သူက ၄ နှစ်ခွဲပဲ၊ ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်
က။ နောက် အောင်ဇော်ဦး၊ သူက ၁၂ နှစ်ကျထားတာ၊ ပဲခူးထောင်ပြောင်းတယ်။"
မနှစ် သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြီးကတည်းက တနှစ်ကျော်ကြာ ထိန်းသိမ်း
ခံထားရတဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲ
ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်တာ၊ ထောင်ပြောင်းတာတွေ လုပ်နေတာကြောင့် ကျန်ဖမ်းဆီး
ခံရသူတွေလည်း ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထောင်ချတာ၊ ထောင်ပြောင်း
တာတွေ ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုတွေကတော့ စိုးရိမ်ပူပန်
အခုရက်ပိုင်း ထောင်ချခံခဲ့ရသူ အတော်များများဟာ တရားရုံးမှာ ရှေ့နေရှေ့ရပ်နဲ့ ထုချေ
ခွင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မရတာကြောင့် အကျဉ်းချုံးပြီး တရားစီရင်တာခံရတယ်လို့လည်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားမှုကိစ္စ ဆွေးနွေးဆဲ
အငြင်းပွားနေတဲ့ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ရေပိုင်နက်ကိစ္စကို နှစ်ဖက်စလုံးက သဘောတူ
ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိခင်မှာ မြန်မာဘက်ကနေ အဲဒီ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ကမ်းလွန်
ဒေသမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေတူးဖော်တာတွေကို ရပ်တန့်ထားဖို့ ဘင်္ဂလား
အဲဒီဒေသမှာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက် ရှာဖွေတိုင်းတာတာတွေနဲ့ တူးဖော်တာ
တွေကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ရပ်ဆိုင်းထားသင့်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ ဒုတိယ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အမ်အေကေ မာမွတ်က ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီနယ်မြေကို သူတို့
ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကလည်း ဆိုထားတာပါ။
အခုလအစောပိုင်းက နှစ်ဖက် အပြန်အလှန်တင်းမာမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့နောက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ
နိုင်ငံ ဒါကာမြို့မှာ နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြတာ အခုဆိုရင်
နှစ်ရက်မြောက်သွားပါပြီ။ မြန်မာဘက်ကနေ ငှားရမ်းထားတဲ့ ဒေ၀ူးပိုင် ရေနံတူးဖော်
ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့ မြန်မာရေတပ်သင်္ဘောတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ်ကနေ သတိ
ပေးတာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် တင်းမာခဲ့ကြတာပါ။
မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ ဒီပိုင်နက်ဟာ မြန်မာပိုင်နက်ဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရထုတ်
သတင်းစာတွေမှာ ကြေညာခဲ့ပြီး ရေနံရှာဖွေတူးဖော်မှုလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားလို့ သင်္ဘော
တွေ ပြန်ရုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကတော့ အဲဒီ
ဒေသမှာ သူတို့ရဲ့ စစ်သင်္ဘောတွေကို ဖြန့်ကြက်ချထားလိုက်သလို ကုန်းလမ်းနယ်စပ်မှာ
လည်း နှစ်ဖက်တပ်တွေ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
စနေနေ့က ၀ါရှင်တန်မြို့တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ စက်မှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ထိပ်သီးနိုင်ငံ ၂၀ တို့ရဲ့ အစည်းအဝေးကနေ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာ ငွေကြေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းရေး နိုင်ငံတကာ စုပေါင်းပြီး ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းကြဖို့ အခြေခံတွေ ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘဏ္ဍာ ငွေကြေး အကျပ်အတည်း တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဒီထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဗွီအိုအေ သတင်းထောက်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Paula Wolfson နဲ့ Michael Bowman တို့က သတင်းဆောင်းပါးတွေ ပေးပို့ထားပါတယ်။ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက အပြည့်အစုံ တင်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးထိပ်သီး နိုင်ငံ ၂၀ က ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ငါးနာရီနီးပါးကြာ စားပွဲဝိုင်းထိုင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံတခု ကနေ တခု ပြန့်ပွားသွားနေတဲ့ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ် ကျဆင်းမှုကို ပြောင်းပြန် လှန်ပစ်ဖို့နဲ့ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာ ငွေကြေး အကျပ်အတည်းမျိုး နောင် ဘယ်တော့မှထပ်မဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရေး နည်းလမ်း ရှာကြဖို့ပါ။ အစည်းအဝေးဟာ အကျိုးကျေးဇူးများခဲ့ပါတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဂ်ျ ဘုရ်ှကပြောပါတယ်။
“အခြေခံ မေးခွန်းကတော့ဗျာ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ တိုက်ကြီး ခြောက်တိုက်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆင့်အသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီလို နိုင်ငံအများကြီး အကြား သဘောတူညီချက်တွေ ရနိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ရဲ့လား၊ သဘောတူညီချက်တွေ က ရော ထိရောက်မှု ရှိပါ့မလား ဆိုတာပါ။ ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေကို ကျနော် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ပြောချင်တာကတော့ အသေအချာပါပဲ ဆိုတာပါ။”
ဒီညီလာခံကနေ ဘဏ္ဍာရေး စနစ်ကို အထောက်အပံ့ပြုမယ့် ချက်ခြင်း လက်ငင်း ခိုင်မာတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတော့ ထွက် မလာပါဘူးလို့ အမေရိကန် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီး Carlos Gutierrez က ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအစား ရှေ့ဆက် သွားရမယ့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ကြဖို့ အားလုံး သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
“G-20 ခေါင်းဆောင်တွေ အတူတကွ စုဝေးပြီး ရေရှည် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်တခုပေါ်မှာ သဘောတူခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ အစည်းအဝေး တခုထဲနဲ့တော့ တကမ္ဘာလုံးရဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေကြား မူအားဖြင့် သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်၊ အနာဂတ်မှာ အစည်းအဝေးတွေ ထပ်လုပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ပေါ်မှာ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။”
အားလုံး ပူးတွဲပြီး အသေးစိတ် လုပ်ငန်း စီမံကိန်းတခု ချမှတ်ဖို့ကတော့ အချိန်ယူရလိမ့်မယ် ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်တွေ အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အသေးစိတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးတွေကို သူတို့တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီ လကုန်မှာ ပြန်တွေ့ဆုံကြမယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန် ရောက်ရင်တော့ အမေရိကန်မှာ သမ္မတ ဘုရ်ှက သူ့ကို ဆက်ခံမယ့် ဘရက် အိုဘားမားကို အာဏာ လွှဲပြောင်းရေး ကိစ္စလည်း ပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ခံ သမ္မတက ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို မတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘဏ္ဍာရေး ကဏ္ဍက ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အတွက်တင် မဟုတ်ဘဲ အမေရိကန် နိုင်ငံသား အားလုံး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စီးပွားရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရေးဟာ အရေးကြီး တယ်လို့ သီတင်းပတ်စဉ် ရေဒီယို မိန့်ခွန်းနဲ့ ကြားကာလ အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ သူ့ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ မစ္စတာ အိုဘားမားက ပြောထားပါတယ်။
“ဒီဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်းက ကျနော်တို့ကို တခုခု သင်ကြား ပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒါဟာ သာမန် ပြည်သူလူထု ဘေး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ငွေကြေးဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ကျနော်တို့ အားလုံး အတူတကွ နိုင်ငံတခုအနေနဲ့၊ လူထုတရပ်လုံး အနေနဲ့ အောင်မြင်စရာရှိ အောင်မြင်၊ ဆုံးရှုံးစရာရှိ ဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။” လို့ ဘရက် အိုဘားမားက ပြောပါတယ်။
ဘဏ္ဍာ ငွေကြေး ဈေးကွက် လည်ပတ်တဲ့ အခြေခံ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ အားကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ G-20 အစည်းအဝေး ကနေ အခိုင်အမာ ကတိက၀တ် ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်သူတွေကို အားပေးဖို့၊ စားသုံးသူတွေကို အကာအကွယ် ပေးဖို့နဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် လှုံ့ဆော် နှိုးဆွပေးဖို့ ကြိုးပမ်းကြမယ်လို့လည်း တက်ရောက်သူတွေက ကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အကန့်အသတ်မဲ့ အလွန်အကျွံ လုပ်ဆောင်တာတွေနဲ့ မတော်မတရား လုပ်တာတွေကို ကာကွယ် တားဆီးဖို့ရာ ဈေးကွက်ကို ကြီးကြပ်မှု တချို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ တခြား တက်ရောက်သူတွေရဲ့ အမြင်ကို သမ္မတဘုရ်ှကလည်း လက်ခံပါတယ်လို့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး Gutierrez ကဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက် ငွေရင်းငွေနှီးစနစ်ကို အားကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီး အဲဒါကို ပြောင်းပစ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ပြဿနာမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ အစွန်းရောက်တဲ့ အလွန်အကျွံ စည်းကမ်းချမှတ် တင်းကျပ်တာ မျိုးတွေ လုပ်ချင်လာ တတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ သတိထားရမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ မျှတတဲ့နည်းလမ်းကို ရှာရပါမယ်။ ကျနော်တို့ အလွန်အကျွံ တင်းကျပ်လိုက်တာကြောင့် နောက်ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါမှ ပြန်ပြင်ဖို့ကြိုးစားရတဲ့အခြေအနေမျိုး ရောက်နိုင်တာမို့ အလွန်အကျွံ စည်းကမ်းတင်းကျပ်လိုက်တာမျိုး လုပ်လို့မရပါဘူး။”
ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ စီးပွားရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်တဲ့ သတင်းတွေ ဆက်ပြီး ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ အခု G-20 ထိပ်သီး အစည်းအဝေး လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ် ကျဆင်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်မှာပဲ ဂျာမနီ နိုင်ငံက တရားဝင် ကြေညာခဲ့ပြီး အလုပ်လက်မဲ့အဖြစ် မှတ်ပုံတင်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားအရေအတွက်လည်း တိုးလာခဲ့သလို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားတဲ့ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်း လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်လို့ ခေတ္တ ဆူနာမီ သတိပေးခဲ့ရ
အင်ဒိုနီးရှာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း စူလာဝေစီကျွန်းမှာ ဒီနေ့မနက်က အင်အားပြင်းထန်တဲ့ ငလျင်လှုပ်ခဲ့တာကြောင့် ငလျင် ဗဟိုပြုရာကနေ မိုင် ၆၂၀ ၀န်းကျင်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကို စူနာမီ သတိပေးချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ဘူမိဗေဒ တိုင်းတာရေး ဌာနရဲ့ အဆိုအရ ငလျင်ရဲ့ ပြင်းအားဟာာ ၇.၅ရှိတာကြောင့်မို့ ဟာဝါအီ အခြေစိုက် ပစိဖိတ် စူနာမီ သတိပေး ဌာနကနေ သတိပေးချက် ခတ္တ ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
စူလာဝေစီကျွန်ရဲ့ မြောက်ဘက် မိုင် ၈၀ အကွာမှာ ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အဲဒီ ၀န်းကျင်မှာ ပြင်းအား ၅.၅ ရှိတဲ့ ငလျင် နှစ်ကြိမ် ထပ်ပြီး လှုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်တွေကလည်း စူနာမီ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ဒီရေလှိုင်းလုံးကြီးတွေ တက်တာ မတွေ့ရလို့ ပြန်ပြီး ရုတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။ စူလာဝေစီ ကျွန်းက ဒေသခံတွေကို ဘေးလွတ်ရာကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြပြီး အဆောက်အဦတွေ ပျက်စီးခဲ့ပေမယ့် အသေအပျောက်နဲ့ အကြီးအကျယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ သတင်းတော့ မရရှိဘူးလို့ အေဖက်ပီသတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြင့်မိုးဇော်/ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
နယ်စပ်ပြဿနာနှင့် ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ နေပြည်တော်မှာ ဆွေးနွေး
Monday, 17 November 2008 19:18 ဧရာဝတီ
နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ၏ ၄ လပတ် အစည်း အဝေးတွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရေပိုင်နက် ပြဿနာတို့ကို ရှေ့တန်းတင် ဆွေးနွေးခဲ့ဟန် ရှိကြောင်း မြန်မာ စစ်တပ် အရေး လေ့လာသူ တို့က ပြောကြားသည်။
တရုတ် - မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် မြန်မာစစ်တပ်အရေး လေ့လာသူ တဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ကျော်ဇောက မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ပုံမှန် ၄ လပတ်အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပမြဲဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် တလနောက်ကျ၍ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
ယခု ၄ လပတ်အစည်းအဝေးပြီးလျှင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦးက ၎င်း၏ လက်ရှိ စစ်ထောက်ချုပ် ရာထူးကိုစွန့်ကာ အတွင်းရေးမှူး ၁ ရာထူးနေရာ၌သာ ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင် သွားမည်ဟု ကြားကြောင်း ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောပြသည်။
“၄ လပတ်အစည်းအဝေး အပြီးမှာ တပ်မတော်ထဲမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်တဲ့ အနေနဲ့ ရာထူးအပြောင်းအလဲတွေ၊ ရာထူးက အနားပေးတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ အခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလေ့လာသူတဦးဖြစ်သည့် ဦးဝင်းမင်းက သုံးသပ်သည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက ဝန်ကြီးရာထူး ယူထားသော တိုင်းမှူးများအနေနှင့် လက်ရှိရာထူးများကို စွန့်ကာ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ - ထိုင်း နယ်စပ်ရှိ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်အားစု (အန်ဒီဒီ) မှ မြန်မာစစ်တပ်အရေး ကျွမ်းကျင်သူ ဦးဌေးအောင်က နအဖ၏ ၄ လပတ်အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂ နိုင်ငံပြဿနာ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု ပြဿနာများကို ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်သည်။
မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂ နိုင်ငံ ရေပိုင်နက် ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဌေးအောင်က မြန်မာ နအဖ၏ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ သွားပြီးမှ တင်းမာမှု ပိုမိုကြီးထွားလာသည်ဟု ပြောဆိုသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုသွားခဲ့ပေမယ့် နှစ်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တချိန်တည်းတွင် ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမကောင်းကြောင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်နေချိန်၌ စစ်အစိုးရ၏ သတင်းစာများတွင် မျက်နှာဖုံး၌ ၎င်းကိုယ်တိုင် အစည်းအဝေးတက်ရောက် ဆွေးနွေးနေသော ဓာတ်ပုံများ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ထို့ပြင် စနေ၊ တနင်္ဂနွေညများတွင် ထုတ်ပြန်သော မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းများ၌ ၄ လပတ် အစည်းအဝေးဟု တရားဝင်မပြောကြားသော်လည်း တက်ရောက်သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ ရုပ်ပုံများကို တယောက်ခြင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်အသိုင်းအဝန်းမှ ကြားသိရသော သတင်းများအရ တချို့သော တိုင်းမှူးများ ရာထူးတိုးသည်ဟု ဆိုသည်။
“အနောက်တောင်ပိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆွေဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ရာထူးတိုးသွားတယ်” ဟု စစ်တပ်အသိုင်းအဝန်းက ပြောပြသည်။
ယခုလအစောပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်အကျဉ်းထောင်များ၏ တရားခွင်များတွင် ကမ္ဘာကပင် အံ့သြရလောက် သည့် အမိန့် ချမှတ်မှုများဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်၏ ထင်ရှားသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုလှမျိုးနောင်အပါအဝင် တခြားထင်ရှားသော ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ်အရေး ကျွမ်းကျင်သူတို့၏ အဆိုအရ ထိုကဲ့သို့ အမိန့်ချမှတ်ခြင်းကို နအဖ၏ ၄ လပတ် အစည်းအဝေး ကျင်းပနေစဉ် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်။
Monday, 17 November 2008 17:58 ကိုသက်
Monday, 17 November 2008 17:39 ကိုသက်
နိုင်ငံရေး အမှုလိုက် ရှေ့နေကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်သိန်းနှင့် ဦးခင်မောင်ရှိန် တို့ကို ယမန်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲခန့်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ အင်းစိန်ထောင်မှ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) က ပြောသည်။
ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းကို ပုသိမ်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီး ရှေ့နေကြီး ဦးခင်မောင်ရှိန်အား မြောင်းမြထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်ဟု အေအေပီပီက ပြောသည်။
အေအေပီပီအဖွဲ့၏အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က “သူတို့ကို ၄ လပဲ အမိန့်ချထားတာ၊ မကြာခင်မှာ ပြန်လွတ်လာမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မကြာခင်မှာပြန်လွတ်လာမယ့်လူတွေကို ထောင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ ဒီရှေ့နေကြီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကို ဒုက္ခရောက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
“နောက်တချက်ကတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းရဲ့မျက်စိအောက်မှာရှိနေတဲ့ အင်းစိန်ထောင်လိုနေရာမျိုးမှာ မထားချင်လို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်း ဦးတိတ်နိုင်က ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါရှေ့နေကြီး ၂ ဦးသည် ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖြစ်ကြသည့် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်များ၊ လူရွှင်တော် ဇာဂနာ၊ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင် မစုစုနွေး၊ အရှင်ဂမ္ဘီရ အစရှိသော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများ၏အမှုများကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။
၎င်းရှေ့နေကြီး ၂ ဦးအား ယခုလ ၇ ရက်နေ့က တရားရုံးတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ရှန်ကုန်ရှိ ဗဟိုတရားရုံးချုပ် ထောင်ဒဏ် ၄ လစီ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ထိုနေ့ည ၁၀ နာရီခန့်တွင် အာဏာပိုင်တို့က နေအိမ်အသီးသီး၌ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
သက်ဆိုင်ရာက နေအိမ်သို့လာရောက်မဖမ်းမီ ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက “နိုင်ငံရေးအမှုတွေကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရမလားဆိုပြီး အာဃာတထားတဲ့သဘောတော့ သက်ရောက်တာပေါ့။ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကတော့ ဒီလိုပါပဲဗျာ … လောလောဆယ် အဓမ္မက နိုင်နေတယ်၊ တချိန်မှာတော့ ဓမ္မ နိုင်ရမှာပေါ့ဗျာ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယမန်နေ့နံနက် အာရုံတက်ချိန်က ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအဝင် ထင်ရှားသည့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ဝေးလံသီခေါင်သည့် နယ်စပ်ဒေသများရှိ အကျဉ်းထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီး မစုစုနွေးအား မန္တလေးထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
ယမန်နေ့နံနက် ၃ နာရီဝန်းကျင်မှ နံနက် ၆ နာရီခွဲ့အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၁ ဦးကို အင်းစိန်ထောင်မှ နယ်ထောင်အသီးသီးသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များက ဧရာဝတီကို ပြောဆိုကြသည်။
မင်းကိုနိုင်နှင့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအား အစွန်အဖျားထောင်များ ရွှေ့ပြောင်း
ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းကို ပုသိမ်ထောင်သို့ပြောင်း
ကိုဝိုင်း/ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၈
ပဲ ကုန်သည်ကြီး ၃ ဦးကို စသုံးလုံးက ဖမ်းဆီး
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 17 2008 19:42 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ပဲဈေးနှုန်းများ အဆမတန် ကျဆင်းလာမှု ဂယက်နှင့်အတူ ပဲဖိုး ပေးချေရမည့် ငွေများကို မပေးဘဲ တိမ်းရှောင်နေသော ၀ယ်လက်ကြီးသမား သုံးဦးကို ရဲက အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ပဲကုန်သည် သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရသည်။
ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှ အသင်းဝင်များဖြစ်သော ကိုဖြိုးကြိုင်၊ ကိုသက်နိုင်ဦးနှင့် ကိုဌေးအောင်တို့မှာ ငွေလိမ်လည်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ကြိုပွိုင့်ဟုခေါ်သော ကြိုရောင်းကြိုဝယ် လုပ်ကြရာတွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း စသည့် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့သော ပဲဈေးနှုန်းများ ထိုးကျလာခြင်းကြောင့် ငွေကွာဟမှု ပမာဏ ကြီးမားသွားရာမှ အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန (စသုံးလုံး)က အရေးယူခံနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဖြိုးကြိုင်ကတော့ အဖမ်းခံလိုက်တယ်။ သက်နိုင်ဦးနဲ့ ဌေးအောင်ကတော့ ရှောင်နေတုန်းပဲ။ ဌေးအောင်ကျတော့ သူ့မိန်းမကို စသုံးလုံး က ခေါ်ထားတယ်။ သက်နိုင်ဦးကတော့ သူ့ဦးလေး ပွဲစားကြီးက ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်" ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ ပဲကုန်သည်ကြီး တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။
ယမန်နှစ်က ပဲတတန်လျှင် ၇ သိန်းဝန်းကျင် ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် ၄ သိန်းကျော်သာ ရှိတော့ရာ ပဲတန်ချိန် ၁၀၀ အတွက် ကျပ်သိန်း ၃၀၀ နီးပါး ဆုံးရှုံး ထိခိုက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
၀ယ်လက်သမားများသည် ကြိုတင်ဝယ်မည်ဟု စာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်က ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့်ဖြင့် ပေးထားကြပြီး အမှန်တကယ် ငွေပေးချေရမည့် အချိန်တွင် ၀ယ်ယူစဉ် ဈေးနှုန်းထက် အဆမတန် ကျဆင်းမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု များပြားလာခဲ့သည်။
ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူများ ပေးလျော်ရန်ရှိသော ငွေမှာ သိန်း ထောင်နှင့်ချီ၍ ရှိနေပြီး သူတို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသော နယ်မှ ပဲအ၀ယ်တော်များ ကုန်သည်များအနေဖြင့် တဦးလျှင် အနည်းဆုံး သိန်း ၅၀ မှ သိန်း ၂၀၀ ကျော်အထိ ထိခိုက်မှုများ ရှိသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ဒိုင်များကို တိုင်ကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
"လက်ကြီးသမားတွေက ပဲတွေ တန် ၅၀၀ မျိုး၊ တန် ၁၀၀၀ မျိုး လုပ်တာလေ။ ကျနော်တို့လည်း ရောင်းထားတာ ပါသွားတော့ ကုန်စည်ဒိုင်ကို တိုင်ထားတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ကတော့ တန်ချိန် နည်းပါတယ်။ တချို့က တန် ရာနဲ့ချီ ထိတာ" ဟု ကုန်သည်က ပြောပြသည်။
မုံရွာမှ ပဲမျိုးစုံ အ၀ယ်တော်တဦးကလည်း "ကျနော်တို့လည်း ထိတာပဲ။ ပိုက်ဆံရော လုပ်ငန်းရောပေါ့။ ခုတဖက်ကလည်း ဈေးတွေက တော်တော်ကျသွားတော့ အရောင်းအ၀ယ်တွေ အေးတယ်။ ၀ယ်လက်ကြီးတွေ အလုပ်မဖြစ်တော့ အောက်ကလည်း ထိတာပေါ့။ အရင်ထက်စာရင် သုံးပုံတပုံလောက် အရှုံးပေါ်တယ်" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသူများသည် ပဲမျိုးစုံ ကုန်သည်လောကတွင် နာမည်ကြီး ကြေးရတတ် ပဲကုန်သည်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရသည်။
"သူတို့က ၄၀ ကျော် ၀န်းကျင်လောက် ရှိတဲ့သူတွေပဲ။ အရာရှိ လူကြီးပိုင်းတွေနဲ့လည်း ရင်းနှီး ၀င်ထွက်တာတွေ ရှိတယ်" ဟု ဘုရင့်နောင်မှ အ၀ယ်တော်တဦးက ပြောပြသည်။
လောလောဆယ်တွင် ကိုဖြိုးကြိုင်နှင့် ပတ်သက်သော ရရန်ရှိ အမှုကိစ္စရပ်များကို စသုံးလုံးမှ ကိုင်တွယ်နေပြီး တိမ်းရှောင်နေသူ နှစ်ဦးကိုမူ သတ်မှတ်ချိန် ၁၀ ရက်အတွင်း လာရောက် ဖြေရှင်းမှုပြုရန်နှင့် လာရောက်ဖြေရှင်းခြင်း မပြုပါက တရားစွဲဆိုမည်ဟု စသုံးလုံးမှ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရန်ကုန်မှ ၀ယ်လက်ကြီး သမားများသည် ပဲခူး၊ ပခုက္ကူ၊ မုံရွာ စသောဒေသများမှ ပဲမျိုးစုံတို့ကို ငွေတရာတွင် တစ်ရာခိုင်နှုန်း ပွဲခပေး၍ နယ်မှ ပွဲစားများကို အ၀ယ်တော် ခန့်အပ်ထားလေ့ ရှိသည်။
၀ယ်လက်ကြီးသမားများမှ ငွေပေးချေမှု မပြုလျှင် နယ်မှ အ၀ယ်တော်များမှာလည်း ကြပ်တည်းကြရသည်။ ငွေရင်းစိုက်ထားနိုင်သူ နယ်မှ အ၀ယ်တော်များအနေဖြင့် စိုက်ထားနိုင်သော်လည်း ငွေရင်း မစိုက်နိုင်သူများအဖို့ ခက်ခဲမှုများရှိသဖြင့် နယ်များတွင်လည်း ပဲအရောင်းအ၀ယ်များ အေးလျက်ရှိကြောင်း နယ်အ၀ယ်တော်များက ပြောပြသည်။
"အခုအချိန်က ပဲရာသီရောက်လို့ ဈေးကျတာ ဆိုပေမယ့် အခုက အိန္ဒိယကဈေးမပေးတော့ဘူး။ ဈေးနှိမ်ဝယ်တယ်။ ဒီနှစ်တော်တော်ဆိုးတယ်။ ပြည်တွင်းပဲဈေးတွေလဲ လိုက်ကျကုန်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်လာတာပဲ" ဟု ရန်ကုန်မြို့မှ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့သူ ကုန်သည်ကြီးတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်တခုတွင် အိန္ဒိယ ပဲဈေးကွက်တွင် မြန်မာ့မတ်ပဲ အပါအ၀င် ပဲစဉ်းငုံ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီလေး၊ မြေထောက်ပဲနှင့် ပဲစိမ်းငုံတို့၏ ၀ယ်လိုအားများနည်း၍ ပဲဈေးနှုန်းကျနေသည်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များတွင် အခြား အဓိက ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအချို့ ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းလာခြင်းကလည်း ပြည်တွင်း ဈေးကွက်အတွင်း ပဲဈေးနှုန်းအားနည်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ကုန်ဈေးကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြသူ ကိုထင်ကျော် ထောင်ဒဏ် ၁၂ ခွဲ ချမှတ်ခံရ
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 17 2008 17:02 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ကိုထင်ကျော်အား အင်စိန်ထောင်ထဲမှာပင် တင်္နလာနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်ခွဲ ချမှတ်လိုက်သည်။
မြင့်တက်လာနေသော ကုန်ဈေးနှုန်းဒဏ် လူအများ ခံစားနေရခြင်းအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး လုပ်ဆောင်ပါရန် မြောက်ဥက္ကလာမြို့နေ ကိုထင်ကျော်က ဦးဆောင်ကာ တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ရာ ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ချလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ခုခံလျှောက်လှဲခွင့် မရဟု တရားဆိုင်ဘက်မှ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသော အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်တွင်းရှိ ခုံရုံးမှ တရားသူကြီး ဦးကျော်ဆွေက ကိုထင်ကျော်သည် သူတပါးထံမှ ခြိမ်းခြောက်ငွေ တောင်းယူခြင်း၊ ဗုဒသာသနာကို အကြည်ညိုပျက်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အစုအဝေးတွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို ပျက်ပြားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့သည်။
"သူက အရင်က အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံး တရားရုံးလေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ တရားရုံးကို အရင်က ထွက်တယ်။ နောက်ပိုင်း အယုံအကြည် မရှိတဲ့အတွက် တရားရုံးကို လုံးဝ မထွက်ဘူး။ မထွက်တော့ သူ့ကို ထောင်းဗူးထဲမှာပေါ့ ဒီထောင်သားတွေထားတဲ့ ဗူးထဲက နေရာမှာ စစ်တော့တယ်။ အဲဒီကနေ ချလိုက်တာ" ဟု တရားရေးဌာနနှင့် နီးစပ်သူ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်း စစ်အစိုးရက ခွဲတမ်းဖြင့် ရောင်းချပေးသည့် လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်းများ အဆမတန် တိုးမြှင့်ခဲ့ရာ အခြေခံ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ ရုတ်တရက် တရှိန်ထိုး မြင့်တက်လာသဖြင့် အစိုးရက ပြန်လည်လျော့ချနိုင်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် ရန်ကုန် သိမ်ကြီးဈေး၌ ဆန္ဒပြသဖြင့် ကိုထင်ကျော် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ယနေ့တွင် အခြားသော ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြခဲ့သူ အချို့ကိုလည်း ထောင်ဒဏ် စီရင်ချက်များ အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားရုံးနှင့် တာမွေ တရားရုံးတို့မှ စီရင်ချက် ချခဲ့ပြန်သည်။
ကြည်ဖြူမောင် (မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်)၊ ကိုဇင်လင်းအောင်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်သူများ ကွန်ယက်မှ ကိုမျိုးသန့် (ခေါ်) ဂျွန်နော်တန် (လှိုင်မြို့နယ်)၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုရဲမင်းဦး၊ ကိုရဲမြတ်ဟိန်းနှင့် ကိုသိန်းဆွေ (ဖျာပုံမြို့နယ်) တို့ကိုလည်း ဆူပူမှုဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ အင်းစိန်ထောင်အတွင်းရှိ အနောက်ပိုင်း ခရိုင် အထူးတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ်ခွဲစီ ချမှတ်လိုက်သည်။
ထို့အပြင် ကိုစည်သူမောင်နှင့် ကိုရဲမြတ်ဟိန်းတို့ကို တရားမ၀င် အသင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဆူပူမှု ဖြစ်ပွားစေရန် လှုံ့ဆော်မှုတို့ဖြင့် တာမွေတရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၁၁ နှစ်နှင့် ၁၀ နှစ် အသီးသီး ချမှတ်လိုက်သည်။
ကိုရဲမြတ်ဟိန်း ၏ မိခင် ဒေါ်စမ်းအေးက "နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဒီလောက် နှစ်ရှည်လများ ထောင်တွေချနေတဲ့ ဥစ္စာဟာ သူတို့ပြောတဲ့ (စစ်အစိုးရ) ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံသစ်ဆီသို့ဆိုတဲ့ စကားက တမျိုးဖြစ်လာပေါ့နော်။ အမှန်ဆိုလို့ရှိရင် ခောတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သောနိုင်ငံ မဖြစ်ဘဲနဲ့ အခုဟာက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ဟိုး ကျန်စစ်သားတို့၊ အနော်ရထားတို့ခေတ်ကို ပြန်ရောက်နေသလို ကျမ ခံစားရတယ်" ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ထောင်အပြောင်းအရွှေ့များလုပ်
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 17 2008 17:53 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ နိုင်ငံရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများအား နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ပြီးနောက် ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်က လူစုခွဲ၍ ထောင်ပြောင်းရွှေ့နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဥာဏ်လင်းနှင့် ဘလော့ဂ်ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်တို့အား ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်မှ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
"ကျနော် ခုနမှ အင်းစိန်ကို သွားပြီး မေးတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့လူက ဘားအံကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်လို့ ပြောတယ်၊ နေဘုန်းလတ်ရော။ ဘယ်အချိန် ပို့လိုက်တယ်ဆိုတာက အသေးစိတ်မသိဘူး" ကိုဥာဏ်လင်း၏ မိသားစုဝင် တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကိုနေဘုန်းလတ်ကိုလည်း ဘားအံသို့ ပို့ဆောင်သည်ဟု ကြားသိရကြောင်းနှင့် လာမည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့မည်ဟု မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးသန်းက ပြောသည်။
ကိုဥာဏ်လင်း၏ မိသားစုဝင်က " သူတို့ကို ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချလိုက်တော့ ပေါင်းလိုက်ရင် နှစ် ၁၀၀ ကျော်နေပြီ။ ဆိုတော့ လူ့သက်တန်း ကုန်နေပြီ။ ဒီကြားထဲမှာ ထောင်ထဲမှာ ဘာမှ တုံ့ပြန်၊ စိုးရိမ်စရာ မရှိတော့တဲ့ ဘ၀ကို အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်ခွင့်လေးတောင် ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆတယ်လေ။ အဲဒီ နေထိုင်ခွင့်လေးတောင် မပေးဘူးဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်နေတယ်လို့ မြင်တယ်" ဟု ပြောသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ထောင်ဒဏ် ၆၅ နှစ် ချမှတ်ထားသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုကိုကြီးအား ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံထောင်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့မှပင် ကိုအောင်သူအား ကချင်ပြင်နယ် ပူတာအို၊ ကိုလှမျိုးနောင်အား မြစ်ကြီးနား၊ ကိုမြအေးအား ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်၊ ကိုဌေးကြွယ်အား ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ ကိုပြုံးချိုအား တနင်္သာရီ ကော့သောင်းသို့ ပို့လိုက်သည်။
"လိုရင်းပြောမယ်ဆိုရင် ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တဲ့ လူတွေကို နောက်ထပ် ပြစ်ဒဏ် ထပ်ချလိုက်တယ်လေ။ အကုန်လုံး စိတ်ဆင်းရဲ၊ လူဆင်းရဲ၊ ကာယကံရှင်ရော မိသားစုတွေရော၊ နောက်ထပ် ပြစ်ဒဏ် ထပ်ချတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်" ဟု အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ပြီးခဲ့သည့် အတိုက်အခံများဘက်မှ လိုက်လံကူညီပေးနေသည့် ဗဟိုတရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းအား ပုသိမ်အကျဉ်းထောင်နှင့် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်အား မြောင်းမြထောင်သို့ ရွှေ့ပစ်လိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို ကဗျာဖြင့် "အာဏာရူး" ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သော ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေအား ရမည်းသင်းထောင်၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးအား မန္တလေးထောင်တို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) အဆိုအရ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေး၊ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီဝင်များ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၂၁ ဦးအား နယ်ထောင်များသို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၇။ သောင်ရင်းနဂါး
ရွှေထွက်ရာသို့ စုရုံးရောက်ရှိလာသည့် ကလေးလူကြီးများ
ရွှေပါဝင်သည့်ဆိုသည့် ကျောက်ခဲများ (ဝဲ)နှင့် တူးဆွနေသော မြန်မာများ
မဲဆောက်မြို့ ဝပ်ချုံဖုန်း ဘုရားအနီးတွင် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ရွှေထွက်သည်ဆိုပြီး မြန်မာ အလုပ်သမား ကလေးလူကြီးများ လာရောက် တူးဆွလျက် ရှိသည်။
အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရန် သယ်လာသည့် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်း ဝပ်စကင်းကျေးရွာမှ သယ်လာသည့် မြေကြီးခဲများတွင် ရွှေတွေ့သည် ဆိုသော သတင်း ပြန့်နှံ့သွားပြီး လူအများ လာရောက် တူးဆွကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရွှေပါဝင်သည်ဟု ယူဆရသော အခဲများကို ပန်းတိမ်တွင် စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ မှတ်ကျောက်အတင်မခံ (ငရဲမီး အစားမခံ)ဟု သိရသည်။ ရရှိသော ခဲလုံးများကို ပန်းတိမ်များက ဝယ်ယူခြင်း မပြုသည့်အတွက် ရွှေရှာသူများ လျော့ပါးသွားသည်။
ရွှေလာရှာရာတွင် မြန်မာများသာမက ဒေသခံ ထိုင်းနိုင်ငံသားများပါ လာရောက် ရှာဖွေကြကြောင်း သိရသည်။ တိုက်သစ်ဆောက်မည့် ဟုံလုံ ကုန်တိုက် သူဌေးက ၄င်းပိုင်မြေတွင် ရွှေရှာနေခြင်းကို ကန့်ကွက် ဟန့်တားခြင်း မပြုပေ။
အရံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေ့စဉ် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေရ
ဖြိုးကြီး။ နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈
အရံရဲတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်း နေ့စဉ် လူစည်ကားရာ အချက်အခြာကျသည့်နေရာများ တွင် လုံခြုံရေးစောင့်ကြပ်မှုများပြုလုပ်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထက် အလုပ်များနေ ကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ လူစည်ကားရာ နေရာများဖြစ်သည့် လှည့်တန်းမီးပွိုင့်၊ ဆူးလေဘုရား၊ မြို့တော် ခန်းမ၊ ရွှေတိဂုံဘုရားပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တော်လှန်ရေးပန်းခြံနားတို့တွင် လုံခြုံရေးတာဝန်များ နေ့စဉ် ထမ်းဆောင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။
“အဲဒီအရံရဲတွေက လစာကလည်း (၃၀,၀၀၀) လောက်ပေးထားတာဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ တော်တော်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်၊ သူတို့တွေက နယ်ထိန်းရဲတွေထက်တောင် အလုပ်များ နေတာ တွေ့နေရတယ်”ဟု ကမာရွတ်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ထိုအရံရဲများသည် မြို့နယ်အတွင်း အနှိပ်ခန်းများ၊ နှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီ ရောင်းသူများထံမှ လိုင်းကြေးအနေဖြင့် တနေ့လျှင် (၂,၀၀၀)နှင့်အထက် တောင်းယူမှုများလည်း ပြုလုပ်နေပြီး အာဏာပိုင်များခိုင်းစေမှုကို တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း မြို့ခံက ဆက်ပြောသည်။
“သူတို့တွေက အထက်ကခိုင်းတယ်ဆိုတာတွေကို အကုန်လုပ်ပေးတယ်၊ လူဆိုးဖမ်းတာလည်း လုပ်တယ်၊ အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်း သူတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေက တော်တော်လေး ပေး ထားတဲ့ သဘောတော့ရှိတယ်”ဟု မြို့ခံက ပြောသည်။
ဘလော်ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်အား ဘားအံအကျဉ်းထောင်သို့ပြောင်း
ဖြိုးကြီး။ နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ယခုလ (၁၀) ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ်အနှစ် (၂၀) ချမှတ် ခံလိုက်ရသည့် ဘလော်ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်အား အာဏာ ပိုင်များက နယ်အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။
ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အင်းစိန်ထောင်သို့ သွားရောက်စုံစမ်း ခဲ့သည့် ဖခင်ဖြစ်သူအား ထောင်အာဏာပိုင်များက ကိုနေဘုန်းလတ်အား ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံအကျဉ်း ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဘားအံထောင်ကို ပြောင်းလိုက်တာပါ၊ ဘယ်အချိန်ပြောင်း တာလဲဆိုတာတော့ အတိအကျမသိဘူး၊ ထောင်မှာ သွားမေးတော့ မနက်က ပြောင်းတာတဲ့၊ တချို့ကပြောတာတော့ ညကတည်းက ပြောင်းတာလို့ပြောတယ်၊ ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကို တာဝန်ခံတယောက်က အင်္ကျီသွားပေးတော့မှ ပြောတာ၊ ပေးလို့မရတော့ပါဘူး၊ ထောင်ပြောင်း သွားပါပြီလို့ ပြောတယ်”ဟု ကိုနေဘုန်းလတ်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်အေးအေးသန်းက ပြောသည်။
ထောင်အာဏာပိုင်များက ကိုနေဘုန်းလတ်အား ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရန် လွယ်ကူကြောင်း ပြောဆိုလိုက်သည့်အတွက် လာမည့်ကြာသာပတေးနေ့တွင် ဘားအံအကျဉ်းထောင်တွင် ထောင် ဝင်စာ သွားတွေ့ရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကိုနေဘုန်းလတ်အား ထောင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “တရားဝင် အကြောင်း ကြားလားဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလိုရှိရင် ဒီလိုတောင်မနေပါဘူး၊ အဲလိုထောင်ပြောင်းလိုက် တဲ့ အပေါ်မှာ အန်တီမြင်တာကတော့ နှိပ်စက်ပြီးရင်း နှိပ်စက်နေတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ကိုနေဘုန်းလတ်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ ထောင်ပြောင်း မည်ကို ကြိုတင်တွေးထားပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက ပြောသည်။
ဘားအံအကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် ကိုနေဘုန်းလတ်နှင့်အတူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဉာဏ်လင်းနှင့် အခြား အမည်မသိရသူ (၁၁) ဦးခန့် ပါဝင်ကြောင်း ဒေါ်အေးအေးသန်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် သံဃာတော်များဖြစ်သည့် ဦးဝိလစက္ကနှင့် ဦးနန္ဒသီရိအား စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာထောင် သို့ ပြာင်းရွှေလိုက်ပြီး ရွှေသံစဉ် ကိုဝင်းမော်အား တောင်ငူ၊ မစုစုနွေးအား ကလေးထောင်များသို့ အသီးသီး ပို့ဆောင်ခြင်းခံရကြောင်း အင်းစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းများနှင့်နီးစပ်သူက ပြောသည်။
ရိုးမ ၃။ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၈